Thit Htoo Lwin: 4/29/12 - 5/6/12
19/05/13 - 26/05/13 (76)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွေးကောက်ပွဲကာလ သုံးစွဲငွေစာရင်းကို သွားရောက်တင်ပြ (ရုပ်/သံ)
ကော့မှူးမြို့နယ်အမတ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ရန်ကုန် တောင်ပိုင်းခရိုင်
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာ ရွေးကောက်ပွဲကာလ သုံးစွဲငွေစာရင်းကို သွားရောက်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
5/09/2012 05:16:00 PM
ရွက်လှေစီမံကိန်းအတွက် အုန်းခင်းပိုင်ရှင်များ ၄ နာရီကြာထိန်းသိမ်းခံရ
၈.၅.၂၀၁၂ အင်္ဂါနေ့ နေ့လည် ၁နာရီအချိန်ခန့်တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပုသိမ်ခရိုင်ရဲမှုးကြီးဖြစ်သူ ဦးမောင်မောင်မြင့် သည်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငွေဆောင်မြို့နယ် အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်ဘူးကွဲကြီးကျေးရွာသို့ရောက်ရှိလာပြီးအုန်းခြံများအတွင်းနေထိုင်သူများကိုအဆိုပါ ညနေ ၄နာရီအချိန်မှာ အပြီးဖယ်ရှားပေးရမယ်။ မဖယ်ပေးပါကဖမ်းဆီးအရေးယူမယ် ဟုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ညနေ ၄ နာရီအချိန်တွင်ငွေဆောင်မြို့နယ်စခန်းမှူး ဆိုသူမှ ဦးကြည်မြင့်၊ ဦးစိုးလွင် နဲ့ဦးစိန်သန်းတို့ သုံးဦးအား ရဲသား ၃ ဦးကိုစေလွှတ်ပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ရဲစခန်းရောက်သော အခါတွင် အဆိုပါရဲမှူးမှ ၄င်းတောင်သူ ၃ ဦးအား ပုဒ်မ ၄၄၇နှင့်အမှုဖွင့်တယ် လို့ပြောပါတယ်။ အဲဒီနောက် တစ်ယောက်စီကိုထွက်မပြေးပါဘူးဆိုတဲ့ ဂတိနဲ့ ဆွေမျိုး ၂ ဦးစီကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းပြီး ပြန်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ ၉၊၅၊ ၂၀၀၂ဗုဒဟူးနေ့မှာတော့ အဆိုပါ အုန်းင်္ခြများကို ရဲသား အယောက် ၃၀ က၀ိုင်းထားပြီး မြေတူးစက်များနှင့်တူးကော်ဖျက်ဆီးလျှက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ အုန်းခင်းများသည် န၀တလက်ထက် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်ငွေဆောင်ဟော်တယ်ဇုံ (၂)ဟု သတ်မှတ်ထားသော်လည်း အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ခြင်းမရှိဘဲသောနေရာများဖြစ်ပြီ်း၂၁၊၀၃၊၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင်အားကစားဝန်ကြီးဋ္ဌာန၊ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင့်ဆန်းကမီဒီယာများကို“ရွက်လှေစခန်းဆောက်လုပ်ရန် အတွက်မြေနေရာသတ်မှတ်သည့်အမှတ်အသားများစိုက်ထူခဲ့သော်လည်း ပြည်သူများနှင့်ညှိနှိုင်းမရသောကြောင့်အဆိုပါနေရာများကို ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည့်နေရာများဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့တောင်သူများမှာ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုဒီဥယျာဉ်များသာရှိပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီနေရာကိုသူတို့ ကသိမ်းပိုက်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဘာအလုပ်ကိုလုပ်စားပြီးမိသားစု ဘ၀ကိုဘယ်လို ဦးစီးရတော့မလဲလို့တောင်သူများကပြောကြားပါတယ်။ ကျောင်းသားမိဘဖြစ်သူတောင်သူတစ်ဦးကလဲ ဒီနေရာမှာဒီအုန်းခင်းလေးကို အားကိုပြီး သမီးလေးကိုကျောင်းထားနေရတာ...အခုအုန်းပင်မရှိတော့ ပညာဒါနကျောင်းရယ်လို့လဲမရှိတော့ကျောင်းထား နိူုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ ရင်ဖွင့်လာပါတယ်။မှတ်ချက်။ ။ ဒါကြောင့် မတရာခံစားနေရသော ဒေသခံတွေအတွက် ဝေမျှခံစားစာနာပေးမှုနှင့်ကူညီတင်ပြ ပေးပါ။ ဥာဏ်ထက်သာ (ဘူးကွဲကြီးကျေးရွာ)
5/09/2012 05:12:00 PM
ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသည့် ကျောင်းသားများ ပညာရေးပိတ်ပင်ခံနေရသည့်ကိစ္စ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စိုးရိမ်
နေသွင် DVB ၀၉ မေလ ၂၀၁၂ ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်တွေက ပညာဆက်သင်ဖို့ ပိတ်ပင်ထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လွှတ်တော်မှာ တင်ပြသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (ဗကသ) ဗဟိုစည်းရုံးရေး ကော်မတီဝင် ၉ ဦးနဲ့ ဒီနေ့ တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာ ဒီကိစ္စကို
ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ ဗကသခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုသီဟ၀င်းတင်က ပြောပါတယ်။ “အန်တီက ကူညီမယ်ဆိုတာက အဓိကတော့ သူ့အနေနဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြောမယ်ပေါ့။ ပြောခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တင်ပြမယ်။ တင်ပြတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ သူ့အနေနဲ့ ပြောတာက ကောင်းတဲ့အရာတခုကို တင်ပြလို့ သူတို့ဘက်က ငြင်းပယ်မယ်ဆိုရင် ဒီအရာကို ပြည်သူတွေက မုန်းမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကို၊ သူတို့အနေနဲ့ ခံရမယ်ဆိုတာကို သူတို့လည်း ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နေတယ် ဆိုတာကို ပြောတယ်။” ကိုသီဟ၀င်းတင်ဟာ ဥပဒေ ဒုတိယနှစ်တက်နေတုန်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ထောင်ကျခဲ့ပါတယ်။ မနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ ထောင်က ပြန်လွတ်လာတဲ့နောက် ကျောင်းပြန်တက်ဖို့ ကျောင်းမှာ သွားရောက်စုံစမ်း ကြိုးစားပေမယ့် ကျောင်းက အကြောင်းပြချက်မပေးဘဲ
ငြင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပြပါတယ်။ ဒီနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့ ဗကသ ဗဟိုစည်းရုံးရေး ကော်မတီဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ကိုကျော်ကိုကို၊ ကိုလင်းထက်နိုင်၊ မဖြိုးဖြိုးအောင်၊ ကိုအောင်အောင်ကျော်၊ ကိုမင်းသွေးသစ်၊ မဟန်နီဦး၊ ကိုနန္ဒာစစ်အောင်နဲ့ ကိုဘုန်းပြည့်ကြွယ်တုိ့လည်း ထောင်က ပြန်လွတ်လာပြီးနောက် ကျောင်းတွေက ငြင်းပယ်ခံထားရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “ထောင်ကထွက်ထွက်ချင်းမှာပဲ ကျနော်က အောက်တိုဘာမှာ လွတ်တယ်။ မဖြိုးဖြိုးအောင်၊ ကျနော်၊ ကိုလင်းထက်နိုင်ရယ်က အောက်တိုဘာမှာ လွတ်တယ်။ လွတ်တော့ သွားစုံစမ်းကြတယ်။ စုံစမ်းတဲ့အနေအထားမှာ သူတို့ဘက်က အဲဒီလိုမျိုးတွေပြောပြီးတော့ ကျနော်တို့ကို ပယ်ချတယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေက နောက်ဆုံးလွတ်တဲ့အခါကျတော့ ကျောင်းကိုသွားပြန်စုံစမ်းတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာလည်း ကျနော်တို့ကို ပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ ပြောတယ်။ ရမလိုလို၊ မရဘူးလိုလို၊ ပြန်ဆက်သွယ်ပါမယ်လို့ ပြောပြီးတော့ ပြန်လည်းမဆက်သွယ်ဘူး။ သွားစုံစမ်းတော့ ခုနပြောသလို ၂နှစ်၊ ကျောင်းကို ပြန်မအပ်လို့ရှိရင် ကျောင်းကထုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ ပြောတယ်။” ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံမှုဟာ ထောင်က လွတ်လာအပြီး ပထမဆုံး အကြိမ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလို တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကျောင်းသားသမဂ္ဂ တရားဝင် ပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့ သမဂ္ဂ ခေတ်မီရေး ကိစ္စကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ ကိုသီဟ၀င်းတင်က ပြောပါတယ်။ “ကျနော်တွေ့တဲ့အချိန်မှာ အန်တီ့အနေနဲ့ပြောတာက ပြည်သူတွေ ခံစားကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဒုက္ခတွေရယ်၊ အဲဒါတွေ ပြောဆိုဆွေးနွေးတယ်။ ဗကသ အဖွဲ့ချုပ်ကို နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမျိုး လေ့လာဖို့ရယ်၊ ပြီးတော့ သမဂ္ဂ တရားဝင်ဖြစ်မြောက်ဖို့ ဥပဒေအရ ကူညီပေးမယ်။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံဆိုရင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကို သူမျှော်လင့်တယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့တွေ ကျောင်းတက်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ရအောင် သူ့အနေနဲ့ ဥပဒေအရ ကူညီမယ်လို့လည်း ပြောတယ်။” ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒီနေ့ တွေ့ဆုံတဲ့ ဗကသခေါင်းဆောင် ၉ ဦးဟာ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွေက ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကြောင့် ထောင်ကျပြီးနောက် မနှစ်တုန်းက ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့် ပြန်လွတ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို ပြည်တွင်း တက္ကသိုလ်တွေက ပြန်လက်မခံရုံသာမက ပြည်ပတက္ကသိုလ်တွေမှာ ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးလည်း သက်ဆိုင်ရာက နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေ ထုတ်မပေးလို့ အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ ကိုသီဟ၀င်းတင်က ပြောပါတယ်။
5/09/2012 04:41:00 PM
HIMO High Art ဆံပင်တုစက်ရုံလုပ်သားများ မကျေနပ်မှု အလုပ်သမားရုံးသို့လာရောက်တိုင်ကြား
မွန်လွဲ ၃ နာရီ၊ မေလ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်- အိမ့်ခိုင်ဦး (YPI) လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန် ၄ ရှိ ကိုးရီးယား နိုင်ငံသားပိုင် HIMO Hight Art ကုမ္ပဏီပိုင် ဆံပင်တုစက်ရုံမှ အလုပ်သမား ၄၀၀ ကျော်တို့ အခြေခံလစာနည်းပါးမှုနှင့် အခြေခံ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်းတို့ အပေါ် မကျေနပ်သဖြင့် ယနေ့ မွန်းတည့်ချိန်မှစ၍ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ အစိုးရ ပြည်ပအလုပ်သမားဆိုင်ရာ အေဂျင်စီရုံး သို့ တိုင်ကြားရန် စုရုံးရောက်ရှိနေကြသည်။ ယနေ့ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီဝန်းကျင်မှ စ၍ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၈ မိုင် မဟာစည်မှတ်တိုင်အနီးရှိ အလုပ်သမားရုံးရှေ့တွင် HIMO စက်ရုံမှ လုပ်သား ၄/ ၅ ရာကျော် စုရုံးရောက်ရှိနေကြသည်။ ယင်းစက်ရုံ အလုပ်သမားများအနေဖြင့် အခြေခံ လုပ်ခလစာနည်းပါးခြင်း၊ အချိန်ပိုကြေးနည်းပါးခြင်း၊ ယင်းစက်ရုံ လုပ်သားများက အခြေခံအလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရာတွင် အလုပ်ရှင်က ယင်းအဖွဲ့ကို တရားမ၀င်ဟု ပြောဆိုခြင်း နှင့် လုပ်ခွင်လုံခြုံမှုမရှိခြင်းတို့ကို တိုင်ကြားရန် ယနေ့မွန်းတည့်ပိုင်းမှ စ၍ ရောက်ရှိနေကြသည်ဟု စက်ရုံလုပ်သား တဦးဖြစ်သူ မယမင်းလွင်က ၀ိုင်ပီအိုင်သို့ပြောသည်။ ၎င်းက “ကျွန်မတို့ဘာဖြစ်လို့လာလဲဆို အခြေခံလစာနည်းလွန်းလို့ ၀င်ခါစ အလုပ်သမားလည်း အခြေခံလစာ ၇ ထောင်ပဲ၊ ၄၊ ၅ နှစ်ကြာတဲ့သူလည်း အခြေခံ လစာ၇ ထောင်ပဲ၊ အခြေခံလစာနည်းတော့ အချိန်ပိုကြေးလည်း နည်းတယ်၊ တနေ့လုံးလုပ်မှ အလုပ်သမားတယောက်က ၂၉၆ ကျပ်ပဲရတယ်” ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။ စက်ရုံလုပ်သားများ ယခုကဲ့သို့ အလုပ်သမားရုံးတွင် မကျေနပ်ချက်ကို တင်ပြရန်လာရောက်ကြပြီး မကြာမီ အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန့်သောင်းရင် ရောက်ရှိလာပြီး ပြန်လိုက်ခဲ့ရန် အလုပ်သမားများအား ပြောသော်လည်း အလုပ်သမားများက ငြင်းဆိုလိုက်ကြသည်ဟု အလုပ်သမားတဦး သိရသည်။ စက်ရုံတွင် ၎င်းတို့ အလုပ်သမားများ ဖွဲ့စည်းသည့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကို တရားမ၀င်ကြောင်းနှင့် စက်ရုံပိုင်ရှင်အလိုကျဖွဲ့စည်းသည့် အဖွဲ့အစည်းသာ တရားဝင်ကြောင်း ပြောဆိုသည်ကိုလည်း စက်ရုံလုပ်သားများက မကျေနပ်ကြကြောင်း လုပ်သားများက ပြောသည်။ HIMO စက်ရုံတွင် အလုပ်သမား ၁၈၀၀ ကျော်ရှိပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်ဟုသိရှိရသည်။ လုပ်ငန်းတူရာ စက်ရုံ အလုပ်ရုံများတွင် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းခွင့်ကို
နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ တရားဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးနောက် ယခုအခါ အနည်းဆုံး အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း ၈ ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလကလည်း လှိုင်သာယာ တိုင်ရီရှုးဖိနပ်စက်ရုံ အလုပ်သမား တထောင်ကျော်တို့ လုပ်ခလစာတိုးမြှင့်ပေးရေးအတွက် ၃ ပတ်ကျော်ကြာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးနောက် အလုပ်သမား ၀ါဏိဇ္ဖခုံရုံးသို့ တိုင်ကြားသည်အထိ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ။
5/09/2012 04:36:00 PM
အများပိုင်နေရာကို စစ်တိုင်းမှူးဟောင်းဇနီးက ဂရန်ပြုလုပ်သည်ကို ကန့်ကွက်
မေ ၉၊ ၂၀၁၂ (YPI)
ငပလီကမ်းခြေရှိ အများပြည်သူပိုင် အပန်းဖြေနေရာအား ယခင်အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး (ပ.ယ.က ဥက္ကဌ) ဗိုလ်ချုပ်သောင်းအေး၏ ဇနီးက ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ် ဂရန်ပြုလုပ်ရရှိခဲ့သည့်အတွက် သံတွဲဒေသခံများက ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ ယမန်နေ့က ကန့်ကွက်စာ ပေးပို့လိုက်သည်။
ပ.ယ.က ဥက္ကဌ ၏ ဇနီး ဒေါ်သင်းမျိုးမျိုးအောင် ဂရန်ပေါက်ရရှိခဲ့သည့် ငပလီကမ်းခြေရှိလင်းသာနှင့် မြပြင်ကျေးရွာအုပ်စုအကြား၊ ကွင်းအမှတ် (VT-၃၉) ရှိ မြေအကျယ် ၄၇၅ ပေကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကတည်းက ခ.ယ.က ဥက္ကဌ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် အများပြည်သူပိုင် အပန်းဖြေနေရာအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးထားခဲ့သည်။
ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ် ဂရန်ပြုလုပ်ရန် ၂၀၁၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် မြို့နယ်မြေစာရင်းရုံး၌ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ကမ်းခြေကျေးရွာများမှ ဒေသခံများနှင့် သံတွဲမြို့မိမြို့ဖများ စုပေါင်း၍ ကန့်ကွက်လွှာ ပေးပို့ခဲ့ကြသည်။
ထိုစဉ်က မည်သို့မျှ အကြောင်းပြန်ကြားခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ ယခုနှစ် မေ ၂ ရက်တွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက လင်းသာကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ကန့်ကွက်ခဲ့သော ဒေသခံများထဲမှ တစ်ဦးကို ခေါ်ယူ၍ ထိုမြေကွက်အား ဒေါ်သင်းမျိုးမျိုးအောင်အမည်ဖြင့် လန(၃၉) ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၀င်းခြံခတ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ခေါ်ယူအသိပေးခဲ့သည်။
“ အဲဒီနေရာမှာ စားသောက်ဆိုင်လေးတွေ ယာယီဖွင့်ထားတာရှိတယ်။ အဲဒါတွေဖျက်ပေးဖို့ပြောတယ်” ဟု ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး က ပြောသည်။
ယခုထပ်မံ၍ သံတွဲမြို့မိမြို့ဖများနှင့် ဒေသခံများစုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးကာ
ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်ထံ ကန့်ကွက်စာကို မေ၈ ရက်က ပေးပို့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဟိုတယ်များတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်လျှက်ရှိပြီး အများပြည်သူများ လွတ်လပ်စွာအပန်းဖြေနိုင်သည့် နေရာ လွန်စွာနည်းပါးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများကပြောသည်။
“ ဒီရာထူးမရရင်လည်း ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ဒီနေရာ(ဂရန်ပေါက်သွားသည့်နေရာ) ကိုတော့ အများအတွက် ပြန်လိုချင်တယ်” ဟု ကန့်ကွက်သူတစ်ဦးဖြစ်သည့် လင်းသာကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောသည်။
ဗိုလ်မှူးချုပ် မြင့်အောင်၊ ဗိုလ်မှူးကြီး မောင်ကို၊ အနောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးဖြစ်ခဲ့သူ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ထွေး၊ ယခင်သံတွဲ ခ.၀.တ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူး ၀င်းဟန် တို့မှ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် လန(၃၉) ရရှိခဲ့ကြောင်း သံတွဲ မ.ယ.က မှ သံတွဲမြို့နယ် မြေစာရင်း ဦးစီးအရာရှိထံသို့ ၂၀၀၆ ခုနှစ် မတ် ၁၇ ရက်က ပေးပို့ခဲ့သောစာ၌ ဖော်ပြထားသည်။ ။
Yangon Press International သစ်ထူးလွင်
5/09/2012 04:30:00 PM
ငါးထောင်တန်အတု သုံးစွဲသူ နိုက်ကလပ်သို့လာရောက်စဉ် ဖမ်းမိ
မေလ ၄ ရက်နေ့ ညက ငါးထောင်ကျပ်တန်အတုများဖြင့် ဝယ်ယူသုံးစွဲနေ သူ တစ်ဦးအား မင်္ဂလာဈေးဝင်းအတွင်းရှိ နိုက်ကလပ် သို့ လာရောက်စဉ် မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ရဲစခန်းမှ ဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။မင်္ဂလာတောင်ညွန့်ရဲစခန်း မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက အဆိုပါနေ့ ည ၁ဝ နာရီ၌ မင်္ဂလာဈေးဝင်း အတွင်း ငွေစက္ကူအတုများအား လူငယ်တစ်ဦးက သုံးစွဲနေ ကြောင်း ပြည်သူ များ၏သတင်း ပေးချက်အရ မင်္ဂလာဈေးဝင် ပေါက်၌ ဇော်မြင့်(ခ) ပွကြီး ဆိုသူအား တက္ကစီပေါ်မှ ဆင်း လာစဉ် ရှာဖွေခဲ့ရာ ၄င်း၏ပိုက် ဆံအိတ်အတွင်းမှBS 2045 732နံပါတ်တူငွေစက္ကူငါးထောင် တန် အတု ၂ ရွက်၊ BK 4304771 နံပါတ်တူ ငါးထောင် တန်အတု ၅ ရွက်နှင့်CA 9472979 နံပါတ်ပါ ၁ ရွက်၊ BX 8566495 နံပါတ်ပါ ၁ ရွက်ကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ၄င်းငှားရမ်း စီးနင်းလာ သော အငှားယာဉ်မောင်းထံ ယာဉ် ငှားရမ်းခ အဖြစ် ပေး ထားသော ၅ဝဝဝ တန်အတု ၅ ရွက်အား ထပ်မံသိမ်း ဆည်းရမိခဲ့ ကြောင်း၊ ၄င်းအား စစ် ဆေးချက်အရ ထိုငွေစက္ကူအတုများ အား ဒဂုံတောင် မြို့နယ်၊ ၅၆ ရပ် ကွက်တွင်နေထိုင်သည့် ရဲမြင့်ဆိုသူ ထံမှ ငါးထောင်တန် အတုတစ်ရွက် လျှင် ကျပ်တစ်ထောင်နှုန်းဖြင့် ဝယ် ယူခဲ့သည် ဟု သိရှိခဲ့ရ သဖြင့် မေ ၅ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရဲမြင့်၏ နေအိမ်သို့ ဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရာ ၄င်း၏နေအိမ် အိပ်ခန်းအတွင်းရှိ သံသေတ္တာထဲမှ ငါးထောင်ကျပ်တန် ငွေစက္ကူအတုလေးရွက်အား ထပ်မံ တွေ့ရှိ၍ သိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။”ဒီငွေအတုတွေက ကျွန်တော် တို့ကိုင်နေတဲ့ ငွေစက္ကူအရွယ်အစား ပုံစံနဲ့တော့ တော်တော်လေးတူ တယ်။ စက္ကူအသားကတော့ နိုင်ငံ ခြားစက္ကူကို သုံးထားတာ။ သူတို့က ဒီငွေတုတွေကို ပရင်တာနဲ့ ထုတ် ထားပေမယ့် လုံခြုံရေးကြိုးအရောင် နဲ့ ငွေစက္ကူအရောင်ကတော့ ငွေ အစစ်နဲ့မတူဘူး။ အတုက အရောင် နည်းနည်းပိုရင့်တယ်”ဟု ငွေတု ပြုလုပ်သုံးစွဲသူများအား သွား ရောက် ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့သည့် အရှေ့ပိုင်း ခရိုင်အထူးမှုခင်း နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့မှ ဒုရဲအုပ်တစ်ဦး က ပြောသည်။အဆိုပါ ငွေတုပြုလုပ်သုံး စွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်ရဲစခန်းမှ ငွေတုကိုင် ဆောင်အသုံးပြုသူ ဇော်မြင့်နှင့် ငွေတုပြုလုပ်သူ ရဲမြင့်တို့အား (ပ)၄၃၈/၁၂၊ ပုဒ်မ ၄၈၉(ခ) (၈)အရ ဖမ်းဆီးအရေးယူ၍ အမှု ဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
5/09/2012 04:09:00 PM
ရွှေပြည်သာ အုတ်ဖုတ် လုပ်သားများ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်မည့်ကိန်းဆိုက်
(ရန်ကုန်၊ မေ ၆)ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်ရှိ အုတ်ဖုတ် လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းရန် ညွှန်ကြား ထားမှုကြောင့် အလုပ်သမားများ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ရမည့် အရေးနှင့် ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေရပြီဟု သိရှိ ရသည်။ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူ လုပ်ငန်းရှင် ၅ဝ နီးပါး ရှိပြီး ၄င်း အုတ်ဖုတ် လုပ်ငန်းများတွင် လာရောက် လုပ်ကိုင်နေကြသော အုတ်ဖုတ် လုပ်သား သုံးသောင်းထက် မနည်းရှိသည်။ လုပ်ငန်းရှင် များက ထိုလုပ်သားများ၏ နေရေး ထိုင်ရေး အတွက် စီစဉ်ပေးထားကြပြီး ယခုကဲ့သို့ အုတ်ဖုတ် လုပ်ငန်းကို ရပ်ဆိုင်းရန်ညွှန်ကြားပြီး အဆောက် အအုံများအား ဖယ်ရှားရန်ပါ ညွှန် ကြားထားမှုကြောင့် ထိုလုပ်သားများ မှာ နေထိုင်ရေး အတွက်ပါ သောက ရောက်နေကြရသည်။”ကျွန်တော်တို့ ဒီအလုပ် လုပ်လာတာ ၉ နှစ် ရှိသွားပြီ၊ ဒီမှာ ပဲနေပြီး ဒီမှာပဲ လုပ်စားလာတာ” ဟု ၅၂ နှစ်အရွယ် အုတ်ဖုတ် လုပ်သား ဦးသိန်းမြင့်က ဆိုသည်။ ထို့ အတူ ရေမြုပ်ကွင်းရွာမှ အုတ်ဖုတ် လုပ်သား ကိုလှခိုင်ကလည်း အုတ်ဖုတ် အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်လာသည်မှာ ၁ဝ နှစ်ခန့်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်း ရပ်ဆိုင်းသွားပါက တခြား အလုပ် လုပ် ရန် အဆင်သင့် မဖြစ်ပါက စားဝတ် နေရေး ခက်ခဲမည့် အပြင် သားသမီး သုံးယောက်၏ ပညာရေးမှာလည်း လမ်းဆုံး သွားနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။”ကလေး သုံးယောက်စလုံး ဇီးဖြူကုန်းမှာ ကျောင်းထားတယ်။ ဒီအခြေအနေအတိုင်း ဆိုရင် ကလေး တွေကို ဒီနှစ် ကျောင်းထားနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး” ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။အုတ်ဖုတ် လုပ်သားများတွင် ဒေသခံ အနည်းငယ် ပါရှိသော်လည်း အများစုမှာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား များဖြစ်သည်။ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသ ကြီးနှင့် အထက်အညာမှ ရွှေ့ပြောင်း လာသူများ အများဆုံး ပါရှိပြီး ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ဟင်္သာတခရိုင် လေးမျက်နှာ မြို့နယ်မှ အချို့ကျေးရွာ များမှ ကမ်းပြိုမှုကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ လာ ကြသော လက်လုပ်လက်စားများ လည်းပါ ရှိသည်ဟု အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းရှင် ဦးစိုးကြီးက ပြောပြသည်။အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်း များတွင် အုတ်ဖုတ်လုပ်သား အများအပြား လိုအပ်လေ့ ရှိပြီး အုတ် (၄/၅) သောင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထွက် အုတ်ဖို အသေးစားများတွင် အလုပ်သမား ၁ဝဝ ထက် မနည်း လိုအပ်ပြီး အုတ် သုံးသိန်းအထက် အကြီးစား အုတ်ဖို များတွင် အလုပ်သမား ၅ဝဝ ခန့် အထိ လိုအပ်လေ့ ရှိသည်။ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်တွင် အုတ် ဖုတ်လုပ်ငန်း များကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှ စ၍ နာမည်ကြီး ကုမ္ပဏီများက ဦးစီး လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။သို့ရာတွင် အစိုးရမှ အုတ်ဖုတ် လုပ်ငန်းများအား ဓာတ်ငွေ့ရောင်းချမှု ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည့် ၁၉၉၆ ခုနှစ် တွင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် အုတ်ဖုတ် လုပ်ငန်းရှင်များက ကုမ္ပဏီကြီး များ ထံမှ မြေများကို လက်ပြောင်းဝယ် ယူခဲ့ပြီး အုတ်ဖုတ် လုပ်ငန်းကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင်လာခဲ့သည်မှ ယနေ့အချိန်အထိ ဖြစ်သည်ဟု အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းရှင် တို့က ဆိုကြသည်။”၂ဝဝ၉ အထိတော့ လုပ်ငန်း လိုင်စင် ထုတ်ပေးတယ်၊ အခွန်လည်း ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း ဆောင်ရတယ်။ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာတော့ လိုင်စင် လည်း ချမပေးတော့ဘူး၊ အခွန် လည်း မကောက်တော့ဘူး” ဟု အုတ်ဖုတ် လုပ်ငန်းရှင် ကိုစိုးကြီးက ပြောသည်။ထို့နောက် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် အုတ် ဖုတ်ရာသီ၌ အုတ်ဖုတ် လုပ်ငန်းများမှာ တရားဝင် ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိ ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် မြို့နယ် ထွေ/ အုပ်ရုံးမှ လုပ်ငန်း ရပ်ဆိုင်း ရမည့် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ခဲ့သည်။သို့ရာတွင် အုတ်ဖုတ် ရာသီ တွင်လည်းဖြစ် အုတ်ဖုတ်လုပ်သား များ၏ သားသမီးပညာရေး အခက် အခဲတို့ကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး အစိုးရထံသို့ အသနားခံစာ တင်ခဲ့ကြရာ အခြေခံပညာကျောင်း များ ပိတ်မည့် အချိန်တွင် အပြီးအပိုင် ဖျက်သိမ်းဆောင်ရွက်သွားရန် အ ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ညွှန်ကြားစာပေးပို့ ခဲ့သည်။၂ဝ၁၂ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တရားဝင် အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်း လိုင်စင်များပေးမည်ဟု ဆိုကာ စာရင်း ကောက်ယူခဲ့ပြီး မြို့နယ်ထွေ/အုပ် ရုံးက တရားမဝင် အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်၍ လယ်ယာမြေများ ပျက်စီး စေမှုဖြင့် ထိုစာရင်းပါ အုတ်ဖုတ် လုပ်ငန်းရှင် ၄၃ ဦးအား တရားစွဲ ဆိုထားသည်ဟု သိရသည်။”ကျောင်းပြီးတဲ့ အထိဆို ပုံမှန် ၃ လပိုင်းအထိပေါ့” ဟု လူလတ် ပိုင်းအရွယ် အုတ်ဖုတ်လုပ် ငန်းရှင် စိုင်းဇွဲပြည်မောင်က ပြော သည်။”မြေသိမ်းတာတော့ မဟုတ် ဘူး။ လုပ်ငန်းဆက်လုပ် ခွင့်မပြုတာ။ ပြီးတော့ တရားမဝင် လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုပြီး တရားစွဲထားတာ” ဟု ၄င်းက ပြောသည်။ယခု အခြေအနေအတိုင်းဆို လျှင် အုတ်ဖုတ် လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းရမည် ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းရှင်များ အနေ ဖြင့် မထောင်းသာ လှသော်လည်း ၄င်းတို့ကို အမှီအခို ပြုနေသော အုတ် ဖုတ်လုပ်သားတို့ အတွက်မှာမူ စား ဝတ်နေရေး၊ သားသမီး ပညာရေးတို့ အတွက် အခက်အခဲများ သေချာ ပေါက် ရှိလာနိုင်ပေလိမ့်မည်။”လုပ်ငန်းတွေ ရပ်ဆိုင်းထား တာ တစ်လနီးပါး ရှိနေပြီ။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်သမားတွေကို ဒီမှာပဲ နေခိုင်း ထားရပြီး တခြား အလုပ်ရှာခိုင်းထား ရတယ်။ အပြန်အလှန် အကျိုးပြုပြီး နေလာတဲ့ လူအချင်းချင်း သူတို့ အခက်အခဲ ကြုံတာ ကြည့်မနေရက် ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အကြာကြီး တောင့် ခံနိုင်မှာတော့ မဟုတ်ဘူး” ဟု လုပ် ငန်းရှင် တစ်ဦးက ဆိုသည်။နှစ်ပေါင်းများစွာ အုတ်ဖုတ် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လာမှုကြောင့် ထိုဒေသများမှာ စိုက်ပျိုးထွန်ယက် ၍ မရနိုင်တော့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အုတ်ဖုတ် လုပ်ငန်းကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးပါက အလုပ်သမား များအတွက်ပါ အဆင်ပြေသွားနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရွှေပြည်သာ မြို့နယ် မှ ကျူရှင်ဆရာ တစ်ဦးကဆိုသည်။”မြေမကောင်းတာ မဟုတ် ဘူး၊ နေရာတိုင်းမှာ အုတ်ခဲကျိုး တွေရှိနေလို့ စိုက်ပျိုးလို့ မကောင်းတာ အလုပ်သမားတွေ အတွက် တခြား အစီအစဉ် အစားထိုးစရာ မရှိသေး ခင် ဒီလုပ်ငန်းကို ဆက်လုပ်ခိုင်းလိုက်ရင် သူတို့တွေ အဆင်ပြေ သွားမယ်ထင်တယ်။ အလုပ်ရှင်ကတော့ ဒီအလုပ် မလုပ်ရ၊ နောက်အလုပ် တစ်ခု ပြောင်းပေါ့” ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။ယခုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရွှေ ပြည်သာထွေ/အုပ်ရုံး သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာတွင် လုပ်ငန်း ရပ်ဆိုင်းရ မည်မှာ မှန်ကန်ပြီး အုတ်ဖုတ် လုပ်ငန်းရှင် ၄၃ ဦးအား တရား စွဲဆို ထား သည်မှာလည်း မှန်ကန်ကြောင်း သိ ရသည်။”ဟုတ်တယ်ဗျ၊ စည်ပင်နယ် နိမိတ် ဖြစ်တာရယ်။ စိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့ မြေတွေမှာ တရားဝင် လိုင်စင်မရှိဘဲ အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်တာရယ် ကြောင့် တရားစွဲထားတာပါ” ဟု ထွေ/အုပ်ရုံး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင် မိုးဦးက ပြောသည်။တရားလို၊ တရားခံ၊ တရားဆိုင် စဲ ကာလဖြစ်ပြီး ရုံးချိန်းခြောက်ကြိမ် အနက် ၄င်းအနေဖြင့် မအားလပ် သဖြင့်တစ်ကြိမ်သာ ရုံးချိန်းတက် ရောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။အုတ်ဖု တ်လုပ်ငန်း ရပ်ဆိုင်း သွားပါက အလုပ်သမား သုံးသောင်း ထက်မနည်း အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ရမည့် အရေးနှင့် ပတ်သက်၍မူ ၄င်းတို့ အနေဖြင့် တစ်စုံတစ်ရာ စီမံထားမှု မရှိကြောင်း၊ အထက်မှလည်း တစ် စုံတစ်ရာ ညွှန်ကြားထားခြင်း မရှိ ကြောင်း ၄င်းက ဆိုသည်။ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်တွင် အုတ် ဖုတ်လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းရန် ညွှန် ကြားထားပြီး ပုဂ္ဂလိက အုတ်ဖုတ် လုပ်ငန်းရှင် ၄၃ ဦးအား တရားစွဲဆို ထားသည်ဟု ဒေသခံ အချို့က ဆိုကြသည်။
5/09/2012 04:01:00 PM
Y-talk မှလွဲ၍ ကျန်အွန်လိုင်းမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို ဥပဒေအရ အရေးယူတော့မည်
Y-talk မှလွဲ၍ အွန်လိုင်းမှ ပြည်ပဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများအား တရားမဝင်အဖြစ် ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်တော့မည်ဟု VMG TELECOMESကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ လက်ရှိတွင် အွန်လိုင်းမှ တရား ဝင်ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည့် Y-talk
စနစ် အား ဈေးနှုန်းလျှော့ချပေးလိုက်ပြီး နောက်သီးခြားခေါ်ဆိုမှုစနစ် အသုံး ပြုခြင်း၊ ခေါ်ဆိုခြင်းများအား အရေး ယူရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ တရားမဝင် ခေါ်ဆိုမှု ဟုဆိုသည့် Pfingo၊ Skype အသုံးပြုမှုများကို အရေးယူရာတွင် လည်း ကုမ္ပဏီမှ ဆောင်ရွက်မည် မဟုတ်ဘဲ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှသာအရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဟု ယင်းကုမ္ပဏီမှ သိရသည်။ ''အင်တာနက်ဆိုင်တွေကို ရှောင်တခင်ဝင်စစ်တာတွေကို မြန် မာ့ဆက်သွယ်ရေးကပဲ ဆောင်ရွက် မှာပါ'' ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ရှိ လာပါကမည်သို့အရေးယူဆောင်ရွက် မည်ကိုမသိရှိရသေးသော်လည်း၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဆက် သွယ်ရေးဥပဒေများအရထောင်ဒဏ်၊ ငွေဒဏ်နှင့်စက်ပစ္စည်းများကို ပြည် သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းသွား နိုင်သည်အထိအရေးယူနိုင်ကြောင်း ၄င်းက ထပ်လောင်းပြောသည်။ အွန်လိုင်းမှ တရားဝင် ဖုန်း ခေါ်ဆိုနိုင်သညY-talk ခေါ်ဆိုခ နှုန်းထားမှာ ယခင်က
နိုင်ငံအပေါ် မူတည်၍ ဈေးနှုန်းကွာခြားပြီး အနည်းဆုံးနှုန်းထားမှာ တစ်မိနစ် လျှင် ကျပ်၁၅ဝ ခန့်ရှိ၍ အခြားခေါ် ဆိုမှုများထက် ဈေးနှုန်းမြင့်မားပြီး သုံးစွဲသူမရှိသလောက် နည်းပါးခဲ့ သည်။ သို့သော် ၄င်းY-talk ခေါ် ဆိုခြင်းကို တစ်မိနစ်အနည်းဆုံး ကျပ် ၈ဝ အများဆုံး ကျပ် ၂ဝဝ သို့ လျှော့ချခဲ့သည်။ ''ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိImage အင်တာနက်ဆိုင်မှ လုပ်ငန်းရှင် က ''အရင်ကတော့Y-talk ခေါ် ဆိုဖို့ အကောင့်တွေ ကတ်တွေ လည်း လိုတယ်။ ခေါ်ဆိုခလည်း
မြင့်တော့ လာတဲ့လူမရှိဘူး။ အခု Pfingo ပုံစံအတိုင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုလို့ ရပြီဆိုတော့ သုံးစွဲမှု များလာနိုင်ပါ တယ်'' ဟု ပြောသည်။ Y-talk စနစ်အား ရတနာပုံ တယ်လီပို့မှ ငွေဖြတ်တောက်ခြင်း၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ ဥပဒေနှင့် လိုင်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ VMG TELECOMESမှ နည်းပညာနှင့် ကတ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများဖြင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၂ မတ်လဆန်းမှ စ၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ၄င်းစနစ်ကို အင်တာနက်ဆိုင်များ ကိုသာ သုံးစွဲခွင့်ပေးထားသည်။
5/09/2012 03:56:00 PM
သြဇီရောက် NLD အမတ်များ မြန်မာသံအမတ်နှင့် တွေ့ဆုံ
သြစတြေးလျနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် NLD လွှတ်တော်အမတ်များ (Credit: ABC) သြစတြေးလျင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးသင်တန်းတက်ဖို့ရောက်နေကြတဲ့ NLD အမတ်တွေ ဟာ ဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ်မှာ တပါတ်ကြာသင်တန်း တက်ရောက် အပြီး ကင်ဘာရာမြို့တော်ကို ရောက်ရှိနေကြရာမှာ ကင်ဘာရာမြို့တော်အခြေစိုက် မြန်မာသံရုံးက သံအမတ်ကြီး ဦးပေါ်လွင်စိန်က လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။
NLDလွှတ်တော်အမတ်များဖြစ်ကြတဲ့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ဒေါ်စန္ဒာမင်းနဲ့ ဦးဖြိုးဇေယာသော် တို့ဟာ သြစတြေးလျလွှတ်တော်ကိုလဲသွားရောက်လေ့လာခွင့် ရ ကြပြီး၊ သြစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ် Julia Gillard နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Bob Carr အပါအဝင် သြစတြေးလျနိုင်ငံက ဝန်ကြီးတွေ အတော်များများနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့ တဲ့အကြောင်း ကင်ဘာရာမြို့တော်ကိုသွားရောက်သတင်းယူနေတဲ့ ရေဒီယိုသြစတြေးလျ မြန်မာပိုင်းက သတင်းထုတ်လုပ်ရေးမှူး မူလှိုင်းသိမ့် က ကင်ဘာရာမြို့ကနေ သတင်းပေး ပို့ ခဲ့ပါတယ်။
ဟစ်ဟော့ပ်အဆိုတော်ကနေ နိုင်ငံရေးဘဝကိုပြောင်းလဲဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ NLD အမတ် ဦးဖြိုးဇေယျာသော်ကလည်း သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ယခင်က Midnight Oil ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီးဂီတအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အခုအခါမှာ လေဘာပါတီလွှတ်တော်အမတ် နဲ့ အခြေခံပညာရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ Peter Garrett နဲ့လည်း တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။
Radio Australia - Myanmar
5/09/2012 09:07:00 AM
အစမ်းသပ်ခံ ပညာရေးမဖြစ်သင့်တော့ဘူးလို့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းပြော
မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကျော်ကာလအတွင်း အစမ်းသပ်ခံ ပညာရေးဖြစ်ခဲ့ပြီး ခုချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ် မရောက်သေးပေမယ့် တိုးတက်မူတွေ ရှိသင့်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်တွေအနေနဲ့ ကူညီပူးပေါင်းမူတွေ လုပ်မယ်ဆိုရင် ကြိုဆိုကြောင်း NLD လွှတ်တော်အမတ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို သယံဇာတနဲ့ ထူထောင်တဲ့ နိုင်ငံမဖြစ်စေလိုပဲ အသိပညာတွေနဲ့ ထူထောင်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်စေလိုတယ်လို့လဲ ပြောလိုက်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ တနင်္လာညနေပိုင်းက သြစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် ကင်ဘာရာမြို့ရှိ ANU တက္ကသိုလ်မှာ ပြုလုပ်တဲ့စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာ ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ စာတမ်းဖတ်ပွဲကို တက်ရောက်နားထောင်သူ ပရိသတ်တစ်ဦးက မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုးတက်ပြောင်းလဲမူတွေ ရှိလာနေတဲ့အတွက် Accademic engagement လို့ ခေါ်တဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းမူတွေ လုပ်ဖို့ သင့်ပြီလားလို့ မေးရာမှာ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မူတွေ လိုအပ်တဲ့အတွက် လာရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပညာရေးသာမက ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတွေမှာလည်း ကူညီထောက်ပံ့မူတွေ ဆက်လက်လုပ်ဖို့ လိုတယ်လို့လဲ ပြောပါတယ်။တိုင်းရင်းသားအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းရာမှာတော့ NLD အနေနဲ့ ဒုတိယပင်လုံစာချုပ်ကြီး ပေါ်ပေါက်လာနိူင်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်း၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) အစရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်း ကြုံရင်ကြုံသလို ဆွေးနွေးမူတွေ လုပ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ တည်ငြိမ် အေးချမ်းမူရဖို့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီ၊ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ အစိုးရအပြင် စစ်တပ်အစရှိတဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေ အားလုံး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး သဘောတူညီမူတွေ ရယူမှသာ ဖြစ်နိူင်မယ်လို့လဲ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါ့အပြင် ပြည်ပကို ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ ပြည်ပမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ ပညာတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ပြီး အကျိူးပြုမူတွေ လုပ်ဖို့ လိုလားကြောင်း ပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်း လုံခြုံစွာ ပြန်လာနိူင်အောင် အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တွေပေးပြီး ဥပဒေတစ်ရပ်အနေနဲ့ ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားသွားမယ်လို့လဲ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဦးဖြိုးမင်းသိန်းအပါအဝင် NLD ပါတီကလွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်သူ ဇေယျာသော်နဲ့ ဒေါ်စန္ဒာမင်းတို့လည်း သြစတြေးလျနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေပြီး သြစတြေးလျနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အစရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြင်သြစတြေးလျနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာသံအမတ်နဲ့လည်း မြန်မာသံရုံးမှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
NLD လွှတ်တော်အမတ်တွေကို သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Julia Gillard တွေ့ဆုံ NLD အမတ်များနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘော့ဘ်ကား
NLD အမတ်များနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံရောက် မြန်မာသံအမတ် ဦးပေါ်လွင်စိန်
5/09/2012 09:04:00 AM
ဟင်္သာတမြို့ မှာ မြောင်းများပိတ်ဆို့ ပြီး ရေလျှံ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတမြို့စည်ပင်သာယာဌာနမှ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ 
အလုပ်မလုပ်မှု့ ကြောင့်မေလ (၄)ရက်နေ့ က ဟင်္သာမြို့ ၏ မြို့ လယ်ခေါင်ဖြစ်သော
မန်းဘခိုင်းလမ်းမှာညနေတစ်မိုးရွာတာနဲ့မြောင်းရေများရှံနေပြီ
ပလက်ဖေါင်းတောင်မြုတ်တော့ မယ့် အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။
မြောင်းတွေကို မြို့ တွင်းမှာ အရှင်းပြ ဓါတ်ပုံရိုက် တိုင်းရုံး ကိုတင် အာဇာနည်ပန်းခြံနှင့် 
အလက ၁ ကြားဖြတ်ထွက့် သည့် မြောင်း၊ တာလေးဂုံးဆင်းကုလားသင်းကြိုင်းကုန်း
ဂုံးမြောင်း၊ ၀က်တန်းမြောင်း မြစ် ကွေ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းနောက်ကမြောင်း၊
CB ဆည်မြောင်း တာတမံပေါ်တွင်ရောင်းချခွင့်ပေးထားသောကျူးကျော်ဈေးသည်များ၏
အမှိုက်များလည်း ထိုမြောင်းတွေထဲသို့ လာရောက်စွန်ပြစ်သောကြောင့် ပိတ်နေပါ
ဘဏ်ရှေ့ ကမြောင်းတွင် အမှိုက်များပိတ်ဆို့ နေခြင်းကိုမရှင်းလင်းသရွေ့ ဟင်္သာတမြို့ 
ရေကြီးနေအုန်းမှာပါ။ လူကြီးလမ်းကြောင်းလာလို့ တစ်ရက်အလိုကျမှ တာလမ်းဘေးဈေး
သည်တွေကို (၃) ရက်မထွက်ရဘူးလျောက်ပြော လမ်းဘေးအမှိုက်များကိုရှင်းခိုင်လျင် လည်း စည်ပင်ဝန်ထမ်းများ ကိုယ်တိုင်မရှင်းဘဲ ၊ အရွယ်မရောက်သေးသောခလေးငယ်
များကို တစ်နေ့ (၁၂၀၀) ပေးပြီး ရှင်းခိုင်ပါတယ်။
၀န်ထမ်းမချပေးလို့ ဆိုပြီးအမှိုက်ကောက်ခိုင်းတဲ့ ခလေးတွေကအမှိုက်ကိုကောက်ပြီး
မြောင်းထပြန်ချနဲ့ သံသရာလည်နေပြီး၊ ဟင်္သာတမြို့ ဟာ အခုဆို့ အမှိုက်မြို့ တော်ကြီး
ဖြစ်နေကြောင်း ဟင်္သတမြို့ ခံတဦး က သတင်းရေးသားပေးပို့ ထားပါတယ်။
5/09/2012 08:48:00 AM
ရွှေညောင်ဖူး-ကျောက်ဆည် လမ်းဖေါက်လုပ်မှုနှင့် လယ်ယာမြေ ဆုံးရှုံးခြင်းများ
လယ်မြေများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေခြင်းကြောင့် ရွှေညောင်ဖူး-ကျောက်ဆည် လမ်းဖောက်လုပ်နေမှုအား ပြန်လည်စီစစ်ပေးပါရန် တင်ပြထားတဲ့ အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ်။Myanmar News Now
ဒဂုံအရှေ့ မြေကွက်များ ပြန်ပေးရန် ညွှန်ကြားချက် ရရှိထားခြင်းမရှိ်ဟုဆို
ရန်ကုန်၊ မေ ၈ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်က အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနမှ ပြန်လည် သိမ်းဆည်းသော ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း မြို့နယ်ရှိ ဝန်ထမ်း မြေကွက်များကို
ပြန်လည် ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုထား သော်လည်း ယခုအချိန်အထိ ဝန်ကြီးဌာနထံမှ ညွှန်ကြားချက် ရရှိထားခြင်း မရှိသေးကြောင်း မြို့ရွာနှင့်အိုးအိမ် ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန မြေယာနှင့် အခွန်ဌာနခွဲ (နေပြည်တော်) ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဟန်ချိုဦးက The Voice Weekly သို့ ယနေ့ ပြောကြားသည်။ "ဝန်ကြီးချုပ် ပြောတာကို ဂျာနယ်တွေမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ ကြတော့ အဆင့်ဆင့် ညွှန်ကြားချက် စောင့်ရတဲ့ အတွက် အခုတော့ အတိအကျ ပြောလို့ မရသေးဘူး" ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ မြေကွက်များကို ပြန်လည် အပ်နှံရန် မြေပိုင်ရှင်များကို အသိပေး အကြောင်းကြား
ထားပြီး သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာအပ်သည့် သူများကို မြေကွက်ဖိုး ပြန်ထုတ်ပေး ထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ် ညွှန်ကြားမှူ ဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေက ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သော တိုင်းဒေကြီး အထူး လွှတ်တော် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ဝန်ထမ်း မြေကွက်များကို လက်ရှိ နေရာတွင်ပင် ပြန်လည် ပေးအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်၏ အဆိုပါ ပြောကြားချက်ကြောင့် မြေကွက်ပိုင် ပြည်သူများ မျှော်လင့်ချက် ပြန်လည်ထားရှိကာ မြို့ရွာနှင့်အိုးအိမ် ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသို့ သွားရောက်မေးမြန်း စုံစမ်းသော်လည်း ညွှန်ကြားချက် မရသေးဟုသာ ပြောနေကြောင်း လုပ်ပေးမည်ဟု ပြောပြီးပါက အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော် သင့်ကြောင်း အဆိုပါ မြေကွက်များကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူများက ဆိုသည်။
5/09/2012 06:37:00 AM
ငါးမြာကြီးရွာမှာ ရေပြာပေါက်ကြမ်းလို့ မြစ်ကမ်းပါးပြို၊ အိမ်အိုအိမ်ကောင်း၊အမြန်ပြောင်းနေကြရ
မကွေးတိုင်း ရေစကြိုမြို့နယ် ဗလဘ အုပ်စုအပိုင် ငါးမြာကြီးကျေးရွာသည် ချင်းတွင်းနှင့်
ယခုအခါမြစ်ရေများ အတက်ကြမ်းလာမှုနှင့်အတူ ရွာအရှေ့ဖျားက အိမ်တန်းများတည်ရှိရာ
အောက်ခံမြေသားတို့ကို ရေဦးတိုက် ကမ်းပါးပြှိုကျ နေသဖြင့် အိမ်အလုံး ၇၀ နှင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖျက်ပစ်ခါလွတ်ရာသို့ပုံထားလိုက်ရပါပြီ။ ထိုရွာတွင် အိမ်ခြေ ၁၃၀ခန့်ရှိရာ ရွာ၏ ၅၀%ခန့် မြစ်ထဲရောက်နေပြီမို့ စိုက်ခင်းများပါ
လောလောဆည် အိမ်ဆောက်ရန် မြေနေရာလည်း မရသေးရာ ကမ်းပါးထိပ်ဝန်း
ကျင်မှာပင် တဲငယ်ကလေးများ ဖြစ်သလိုထိုးပြီး နေထိုင်နေကြရသည်။ ရပ်ဝေးမှ ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟများ သိရှိကူညီပေးနိုင်ကြ၇န်
ဓာတ်ပုံများမှာ ၆.၅.၁၂ နေ့ကရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပြီး
သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင် ဥိးသိန်းမြင့်(NLD yesagyo)
5/08/2012 09:59:00 PM
သေဒဏ်ချမှတ်ခံရသူ ကိုဖြိုးဝေအောင် (ဓါတ်ပုံ-Google Images)
၂၀၁၀ ခုနှစ် ရန်ကုန်သင်္ကြန် X2O မဏ္ဍပ် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရဲ၏ တရား စွဲဆိုခြင်း ခံခဲ့ရသူ ကိုဖြိုးဝေအောင်ကို သေဒဏ်နှင့် တသက်တကျွန်း ပြစ်ဒဏ်များ အပါအဝင် ထောင်ဒဏ်များကို တပေါင်းတည်း ကျခံစေရန် အင်းစိန်ထောင် တရားရုံးမှ အင်္ဂါနေ့တွင် အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်ဟု ကိုဖြိုးဝေအောင်၏ ရှေ့နေ ဦးကျော်ဟိုး က
မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ကိုဖြိုးဝေအောင်ကို ချမှတ်သည့် ပြစ်ဒဏ်များမှာ ကြိုတင်ကြံစည် လူသတ်မှုကို အားပေးသည့် အမှုအတွက် သေဒဏ်၊ဖေါက်ခွဲမှုကို
အားပေးသည့်အမှုအတွက် ထောင်ဒဏ် တသက်တကျွန်း၊ အပြင်းအထန် နာကျင်စေမှုကို အားပေးသည့် အမှုအတွက် ထောင်ဒဏ် ၁ဝ နှစ်၊ မတရားသင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုအတွက် ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်၊ နိုင်ငံအတွင်း တရားမဝင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမှုအတွက် ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်တို့ ဖြစ်သည်ဟု ဦးကျော်ဟိုးက ပြောသည်။“အဲဒီအမှုတွေကို တပေါင်းတည်း ပေါင်းပြီးတော့ ကျခံစေ ဆိုပြီးတော့ သေဒဏ် ချထားတယ်” ဟု ဦးကျော်ဟိုး က ပြောသည်။အင်းစိန်ပရဝုဏ်အတွင်းရှိ
ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် တရားသူကြီး ဦးအောင်သိန်း၏ အဆိုပါ အမိန့်ချမှတ်မှုကို ကျေနပ်မှု မရှိဘဲ ဆက်လက်၍ အယူခံဝင်သွားမည်ဟုလည်း ဦးကျော်ဟိုး က ပြောသည်။“ဒီအမိန့်ကိုလည်း ကျနော်တို့ မကျေနပ်ပါဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီအမှုဟာ မမှန်ဘူး။ မတရား ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက် ပြီးတော့ ယူထားတဲ့ ဖြောင့်ချက် ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဥပဒေအရ တရားမဝင်ဘူးလို့ ကျနော်တို့ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို တရားရုံးက လက်မခံဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒါကို အယူခံရုံးက လက်ခံအောင် ကျနော်တို့ ကြိုးစားရမှာပေါ့။ ကျနော်တို့ အယူခံ ကာလ ရှိသေးပါတယ်။ အယူခံကာလကို စောင့်ပြီးတော့မှ သေဒဏ် ပေးလို့ရမယ်။ ကျနော်တို့ အယူခံတင်ပါမယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုဝေဖြိုးအောင်ကို စွပ်စွဲဖမ်းဆီးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းမှုများ ရှိနေနိုင်ပြီး သက်သေ အထောက်အထားများ မမှန်မကန်ရယူမှု၊ တရားမဝင် ဖမ်းဆီးမှု စသည့်အချက်များကို ထောက်ပြကာ တရားရုံးမှပြန်လည်စိစစ်၍ စီရင်ချက်ချရန် မေလ ၆ ရက်နေ့တွင် အာရှ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ခဲ့သေးသည်။အမှုမှာ
၂ဝ၁ဝ ဧပြီ ၁၅ ရက်နေ့ (သင်္ကြန်အကြတ်နေ့) က ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီး ပတ်လမ်းရှိ X2O ရေကစားမဏ္ဍပ် တွင် ဗုံး ၃ လုံး ပေါက်ကွဲသည်။ ထိုဗုံးခွဲမှု တရားခံအဖြစ် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် တောတွင်းအခြေစိုက် စွမ်းအားမြှင့် မြန်မာကျောင်းသား
စစ်သည်တော်များအဖွဲ့ VBSW မှ အဖွဲ့ဝင် ၃ ဦး လက်ချက်ဟု ရဲချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီ (ယခု လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီး)က
ထိုနှစ် မေလ ၆ ရက်နေ့ နေပြည်တော် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ကိုဖြိုးဝေအောင်ကိုလည်း
ဗုံးဖောက်ခွဲနိုင်ရေး စောင့်ကြည့်ပေးခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့ရုံမက VBSW အဖွဲ့ဝင်တဦး ဖြစ်သည် ဆိုသော ယူဆချက်ဖြင့် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၅၅ လမ်း အလယ်ဘလောက်ရှိနေအိမ်သို့ ရဲများ ရောက်လာရောက် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး တရားစွဲဆိုကာ ယခုကဲ့သို့ ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။အဆိုပါ X2O မဏ္ဍပ် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွင် လူ ၁ဝ ဦး သေဆုံးပြီး ၁၇ဝ ခန့် ဒဏ်ရာရကြောင်း ယခင် စစ်အစိုးရက သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မျိုးသန့် - ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)
5/08/2012 09:47:00 PM
လှိုင့်ပေါ်မေးတင်ထားရသော သူတို့ ဘ၀
အိမ်ခြေ ၄၀၀၊ လူဦးရေ (၃၀၀၀) ၀န်းကျင်ဖြင့်နေ့ စဉ်လှုပ်ရှားသက်ဝင်နေသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ် (တဖက်ကမ်း) စက်ဆန်းရပ်ကွက် လှိုင့် ကိုအမှီပြုသူများ။ ထိုလူဦးရေဧ။် ၈၀% ဟာ လက်လုပ်လက်စား ဘ၀တွေ။ သူတို့ ရဲ့နေ့ စဉ် ရပ်တည်မှုနဲ့ ၊ သားသမီးတွေကို ပညာထားရခြင်း စရိတ်များသည် လှိုင်မြစ်ပေါ်တွင် လှော်ခတ်မောင်းနှင် နေကြသော စက်သံတို့ ကို မှီခိုနေကြပါလား။ ဒီလိုနဲ့လှုပ်ရှားလည်ပတ်နေသော လှိုင်မြစ်ကို မှီခိုရသော သူတို့ကံကြမ္မာ မိုးမှောင်ကျသောနေ့ ။
ကြီးမား လှသော အတွဲလိုက် ဘောစီတွဲ များ လှိုင့် မျက်နှာပြင်တွင် နေရာယူလာကြပြီ။ တနေ့ နည်းနည်းနှင့်ပုံမှန် ဆိုက်ကပ်ထားလာ ကြရမှာ ယခုဆို (စက်ဆန်းရပ်ကွက် နင့်တခြား တဖက်ကမ်း တည့် တည့် တွင်ရှိသော မြစ်ကြေင်းတလျှောက်တွင်) စီဘောတွဲများက မြစ်ကြောင်းကို ကြီးမားစွာ ပိတ်ဆို့ ကြလေပြီ။ သူတို့ သည်းခံရှာဧ။်။ မပြောရဲပါ။ ရွှေ့ ပေးပါရန် မတောင်းဆိုရဲပါ။ သူတို့ နေပေမဲ့ကံကြမ္မာက မနေ။ ထိုနေ့ ။ မည်သူမျှမမေ့ ။ ပုံမှန်ရေစီးကြောင်းသဘောကို နားလည်စွာမောင်းလာရင်း သဘောင်္တစီး အရှိန်ဖြင့် တက်လာသည်ကို ထိုလှေ၇ှင်မြင်ပါလေပြီ။ စက်ရှိန်ကိုသတ်ပြီး အတတ်နိင်ဆုံးကြိုးစား လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားပါဧ။်။ ရေစီးကလည်းသန်လှဧ။်။ စီဘောတွဲများအောက်သို့လှေတစင်းလုံး မြုပ်ဝင်သွားဧ။်။ အနီးအနားမှ လှေအစင်း နစ်ဆယ်ကျော်တို့ ပြေးကြလေပြီ အခင်းဖြစ်ရာရေပြင်သို့ ။ စီဘီတွဲများ အပြင်ဖက်ပတ်လည်မှ။ ပေါ်ထွက်လာသမျှ လူကို ဆွဲတင်ကာ ဆယ်ကြဧ။်။ သို့ သော် တဦးသည် ၀မ်းပြာကြီးသော စီဘီ သဘောင်္တွဲ အပြင်ကို ရောက်အောင်အားမထုတ်နိင်သည် ထင်သည်။ ပေါ်မလာတော့.။ ထိုသို့ ဖြစ်ပေါ်မှုအတွက် လှေသမားအား ထောင်ဒဏ်နင့်ထိုလူမောင်းသော ရပ်ကွက် (စက်ဆန်း) လှေသမားအားလုံး (၄၅)ရက် မမောင်းရပါဟု အထက်မှအမိန့် ချလေသည်။ အကြောင်းပြချက် မှာလှေ နစ်စဉ် ၀ိုင်းမဆယ်သောကြောင့် အပြစ်ပေးခြင်းတဲ့ ။ အပြေးအလွှား ၀ိုင်းနေသော လှေများကို သင်ဘယ်မြင်နိင်မလဲ ( ရုံးခန်းထဲ ထိုင်နေတာကိုး)။ ရလဒ်ကား ထိုလူစု ထမင်းအိုးလက်လွှတ်ကာ ကလေးတို့ ပညာမဲ့ ရပြီ။ ဘာနဲ.စားကြမလဲ။ အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်းများ ဖန်တီးနေကြသော ယခုလို ခေတ်မျိုးတွင် သူဆင်းရဲတို့ ဧ။် ငိုသံကို သင် ကြားနိင်ပါသလား သမ္မတကြီး။ ကျုသည်ကားပထမအကြိမ်။
အပြစ်ဒဏ်ကို ခံယူပြီး (အတိုးများနင့် ယူုရ်ျ ခဏတာ စားရေး နေရေး ဖြေရှင်းအပြီး) တပတ်အကြာ ပြန်မောင်းပြီးသည့် နောက် ကျောက်သဘောင်္နင့်စီဘီတွဲကြား ကံဆိုးသူ မောင်ရှင် ဖြစ်ပြန်လေပြီ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ကား (၆၀)ရက် မမောင်းရတဲ့ ။ ကျွန်တော် မခံစားနိင်တော့ သူတို ဧ.် ငိုသံများကို။ ပထမအကြိမ် တင်သော အကြွေးကို ကြိုးစား လှေမောင်းကာ ဆပ်မည်ဟု အားခဲရှာသော သူတို့ ။ ဒူးတို့ ထောက်ရ်ျ မျက်ရည်စက်တို့ တပေါက်ပေါက်။ ယခု မေလလယ်နီးတော့မည်။ မကြာခင် ကလေးသူငယ်တို့ ကျောင်းဖွင့် ချိန်နီးတော့မည်။ သားလေးနင့် သမီး လေးကို ကျောင်းအပ်ရန်၊ လိုအပ်သော ပစ္စည်းတို့ ကို မည်သည့် ငွေနင့် သူတို့ ဖန်တီးကြရတော့မည်နည်း။ (အကိုတို့ အထက်ကိုတင်ပြကြပါလားဗျာ။ ကားလိုင်းမှာလည်း ကားတိုက်မှု ဖြစ်သော် ကာယကံရှင် တဦးတည်းကိုသာ ပိတ်တာပါ။ တလိုင်းလုံးမပိတ်ပါဖူးဗျ ဟု ဒေါမနသနင့် ပြောသော ကျွန်တော်...သူတို့ အဖြေကြားတော့ အတော်ဂရုဏာသက်မိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ သွားပြောပြီးပါပြီတဲ့ ။ ကြည့် မြင်တိုင်မြို့နယ် မယက ရုံးမှ ပြောလိုက်ပါသည်။( တိုင်ချင်ရာ ပါတီတိုင် ၊ မဖွင့် ပေးနိင်ဖူးတဲ့ ။ ဒါအထက်က အမိန့် တဲ့ ။ ) လူ့ အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာလဲ။ လူ့ အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဟာ ရေနွေး စုသောက်ကြဖို့ ဖွင့် ထားတာလား။ ဒီလို လူ့ တဦးချင်းစီရဲ့ အခွင့် အလမ်းတွေကို လူတဦးအတွက် ရောပြီး စွန့် လွှတ်နေရတာတွေ...... မကြားတာလား။ မဖြေ၇ှင်းချင်တာလား။ ထို၇ပ်ကွက်မှ ပေးလိုက်သော ဆန္ဒမဲတွေနဲ့ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်နေသော အမတ်ရေ... အဲကွန်းအေးလို့ခင်ဗျား ပါးစပ် မပွင့် တာလား။ မပြောပေး ၊ မကယ်တင်ပေးတော့ဖူးလား။ ဒီလူဆင်းရဲတွေရဲ့ ဘ၀တွေကို... ခင်ဗျားအေ၇းမဟုတ်လို့မပြောတာလား။ သူတို့ မျက်ရည်တွေနဲ့ ညည်းသံတွေဟာ ခင်ဗျားတို့ အတွက် သံစဉ် ကောင်းတဲ့ တေးတပုဒ် မဖြစ်ကြပါစေနဲ့ ဗျာ။ အမြန်ဆုံး အဆင်ပြေချောမွေ့ ကြပါစေ
လှိုင့် မြစ်ကိုမှီခိုနေကြသော လှေသမားတွေ
တေဇာလင်း Myanmar News Now
5/08/2012 09:38:00 PM
ပြီးခဲ့တဲ့ပညာရေးဆောင်းပါးဖြစ်တဲ့ အငိုလွယ်ပြီးအရှိုက်ခက်လာနိုင်သော ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဥပဒေမှာ ရေးသားခဲ့သလို မြန်မာနိုင်ငံပညာရေး ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဥပဒေကြောင့်တိုးတက်လာနိုင်သလားဆိုတာကိုဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း(Private School)နှင့် အလွတ်ပညာသင်ကျောင်း (Tution)မတူဘူးဆိုတာ သိရပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်လျောက်လုံးဖြစ်ထွန်းလာခဲ့တာ ကျူရှင်လို့ခေါ်တဲ့ အလွတ်ပညာသင်ကျောင်းတွေပါ။ နိုင်ငံတကာမှာလည်းရှိပါတယ် မိမိတက်ရောက်လိုတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုရဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဘောင်အတွင်းမှာ သင်ကြားတဲ့ကျောင်း(သို့) သင်တန်းက သင်ကြားတာတွေကို နားမလည်လို့ (သို့) ပိုမိုတတ်ကျွမ်းချင်လို့ မိမိသင်ကြားလိုသော ဘာသာရပ် တစ်ခု (သို့) ဘာသာအားလုံးကို မိမိပိုင်ငွေကြေးနဲ့အချိန်ပို သင်ကြားကြရခြင်းပါ။ သင်ကြားတဲ့ဆရာ၊ဆရာမများကလည်း မိမိတို့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရပ်အလိုက်သော၎င်း၊ အစုအဖွဲ့လိုက်သော်၎င်း သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှာ မှတ်ပုံတင်ပြီး သင်ကြားကြရတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း(၁၉၈ဝ)ပတ်ဝန်းကျင်လောက်က ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျူရှင်ဥပဒေတစ်ခု ပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့အချိန်ထိလည်းဖျက်သိမ်းခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အသက်ဝင်နေဆဲပါ။ ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာသင်ကြားနေတဲ့ကျူရှင်ဆရာအများစုဟာ ဒီဥပဒေအရတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသင်ကြားရမှာ ဖြစ်ပေမဲ့လည်း (၉ဝ%)လောက်ဟာ မှတ်ပုံတင်တဲ့သူနည်းပါးပါတယ်။ မှတ်ပုံမတင်တာကလည်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရှုပ်ထွေးမှုရယ်၊ တစ်ချို့သောအချက်လေးတွေက ခေတ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့မကိုက်ညီတာရယ်ကြောင့်ပါ။ ဒီအထဲမှ သင်ကြားမှုငွေကြေးရယ်၊ တစ်မိုးအောက်မှာပြသနိုင်တဲ့ ဘာသာအရေအတွက်ရယ် နဲ့ကျန်တာလေးတွေ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲလိုက်ရင်ကို ဒီဥပဒေဟာတော်တော်လေးပြည့်စုံမျှတတယ်လို့ပြောရမှာပါ။
ဒီကျူရှင်ကျောင်းတွေမှာ တော့ ကျောင်းစာအမှတ်ကောင်းအောင်သင်ကြားခြင်းတာဝန်သာသီးသန့်ဖြစ်လို့ လိုအပ်ချက်နည်းပါးသလို တာဝန်ယူမှုလည်း နည်းပါးပါတယ်။ ဒါအပြင် . .ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ ဗလငါးတန်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာလည်း ဝေးကွာလွန်းလှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း (Private School) တစ်ခုဖွင့်လှစ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ သင်ကြားရေးကောင်းမွန်မှုနှင့် အမှတ်ကောင်းယုံမျှမကတော့ဘဲ ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့ ဘဝရှေ့ရေးအတွက် တာဝန်ယူမှုတွေအများကြီးရှိလာပါတယ်။ အဓိကအရေးအကြီးဆုံးအချက်တွေကတော့ -
၁။ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတစ်ကျောင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်မည့်သူတိုင်းသည် မိမိဖွင့်လှစ်မည့်ကျောင်းနေရာ၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားပြနိုင်ရမည်။(အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်-မြေယာဌားရမ်းဆောင်ရွက်ပါက ကျောင်းရပ်တည်မှုတည်ငြိမ်မှုမရှိနိုင်ခြင်း၊ အာမခံချက်မရှိခြင်း)။ ၂။ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းတည်ထောင် ဖွင့်လှစ်မည့်သူတိုင်း သင့်တင့်သောငွေကြေးတစ်ရပ်ထူထောင်၍ နိုင်ငံတော် (သို့) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွင်(Deposite Money) အပေါင်အဖြစ်ထားရှိခြင်း။ ( အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာနစ်နာမှုများ ကြုံတွေ့လာပါက ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်)။
၃။ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတစ်ကျောင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်မည့်သူတိုင်းကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ရှိရပါမယ်။ (ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကျောင်းအုပ်ချုပ်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ မိဘနှင့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတို့အား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တာဝန်ခံမှု) တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းက မိမိစိတ်သဘောကျဆောင်ရွက်ပါက မိဘနှင့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ နစ်နာစေနိုင်ခြင်း။ ၄။ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတစ်ကျောင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်မည့်သူတိုင်း မိမိကျောင်းသားကျောင်းသူများ ဆက်လက် တက်ရောက်သင်ကြားမည့်တက္ကသိုလ်ဘုတ်အဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသော သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ဘောင်အတွင်းမှ ရေးဆွဲထားသော မိမိကျောင်းပိုင်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရှိခြင်း။ နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်၊ပြည်တွင်းတက္ကသိုလ်များဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားခြင်း။
၅။ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတစ်ကျောင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်မည့်သူတိုင်း မိမိကျောင်းတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော သင်တန်းများနှင့် လျော်ညီလုံလောက်သော သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဆရာ ဆရာမဝန်ထမ်းအင်အား ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီရေးသားတင်ပြ၍ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း။
၆။ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတစ်ကျောင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်မည့်သူတိုင်း ခန့်အပ်သည့်ဆရာ၊ ဆရာမနှင့် ဝန်ထမ်းများကိုလည်း နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားသည့် အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်၍ ခံစားခွင့်များပေးခြင်း။
၇။ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတစ်ကျောင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်မည့်သူတိုင်း ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများ အရည်သွေးစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့၏ လစဉ်၊ နှစ်စဉ် ဥပဒေနှင့်အညီစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်းကိုအပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
၈။ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတစ်ကျောင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်မည့်သူတိုင်း မိမိတို့ဝင်ငွေအရကျသင့်သောအခွန်အခများကို အပြည့်အဝ မှန်မှန်ကန်ကန်ထမ်းဆောင်ခြင်း။
၉။ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတစ်ကျောင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်မည့်သူတိုင်း နိုင်ငံတော်မှပြုလုပ်သော ပညာရေးဆိုင်ရာ အခမ်းအနားများနှင့် လိုအပ်၍တာဝန်ပေးချက်များကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
၁ဝ။ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတစ်ကျောင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်မည့်သူတိုင်း နိုင်ငံတော်မှချမှတ်ဆောင်ရွက်နေသော ပညာရေး ပေါ်လစီများကို ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။ ၁၁။ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတစ်ကျောင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်မည့်သူတိုင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရကျောင်းများနှင့်နည်းတူ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း . . . .စသည်ဖြင့် အချက်အလက်တွေနှင့်ပြည့်စုံရပါမယ်. . ။ကျန်တာတွေလည်းရှိဦးမှာပါ။ ဒါ့အပြင် အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ –
(က) ကျောင်းမှာ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောကျောင်းစာကြည့်တိုက်ရှိရပါမယ်။
(ခ) ကျောင်းမှာကောင်းမွန်သော ကျောင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရှိရမယ်။
(ဂ) ကျောင်းမှာသင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အားကစားကွင်းရှိရပါမယ်။(အနည်းဆုံးဘတ်စ်ကက်ဘောကွင်း)
(င) ကျောင်းမှာသင့်တင့်လျောက်ပတ်သော မာတီမီဒီယာအခန်းရှိရပါမယ်။
(စ) ကျောင်းမှာသင့်တင့်လျောက်ပတ်သော မုန့်ဈေးတန်းရှိရပါမယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းနဲ့ အလွတ်ပညာသင် သင်တန်းကွဲပြားလောက်ပြီထင်ပါတယ် . .ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီက ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းထောင်မည့်သူများ၊ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွင် မိမိတို့သားသမီးများကို ကျောင်းထားမည့်သူများ၊ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဥပဒေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြဌာန်းခဲ့ကြသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်မှုကိုအသားပေးရေးသားခဲ့ကြသောမီဒီယာများအောက်ပါအချက်များကိုဖြေကြည့်ကြစေချင်ပါသည်။
၁။ ယခုပြဌာန်းသော ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဥပဒေကြောင့် နိုင်ငံတော်ပညာရေးတိုးတက်လာနိုင်ပါမည်လား . .
၂။ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတည်ထောင်မည့်သူများမှလည်း မိမိကိုယ်ကိုမိမိ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း တည်ထောင် နိုင်လောက်အောင်၊ အဖက်ဖက်မှပြည့်စုံလုံလောက်နေပါပြီလား . .
၃။ အစိုးရကျောင်းများတွင် ပိုက်ဆံကုန်ပြီးပညာမတတ်၍ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းပြောင်းထားလျှင် မိမိတို့ကလေး သေချာပေါက် ပညာတတ်ပြီလို့တစ်ထစ်ချယုံကြည်ပါသလား . . ၄။ မိဘအချို့၊ မီဒီယာအချို့ရေးသားရင်ဖွင့်သကဲ့သို့ ပညာရေးလောက အစိုးရကျောင်းမှ ဆရာ၊ဆရာမများမှာ နိုင်ငံနှင့်အဝှမ်း သုံးမရလောက်အောင်ပျက်စီးနေပါပြီလား . .
၅။ ယခုဖြစ်ပေါ်နေသောကျောင်းသားများစာမတတ်လို့ဆိုသောစကားမှာ အစိုးရ၏ပညာရေးပေါ်လစီကြောင့်လား . . ဆရာ၊ဆရာမများ၏ချို့ယွင်းချက်ကြောင့်လား . . ၆။ ဒီဥပဒေဟာ နိုင်ငံတော်ပညာရေးတိုးတက်မှုအတွက် အရေးတကြီးကိုလိုအပ်ပါသလား . .
၇။ ဒီဥပဒေဟာ နိုင်ငံတော်ပညာရေးတိုးတက်မှုအတွက် နိုင်ငံသားအများစုကိုကိုယ်စားပြုပါသလား
၈။ မီဒီယာများအနေဖြင့်လည်း ဆရာ၊ ဆရာမအချို့၏ ချို့ယွင်းချက်၊အားနည်းချက်များကို တစ်ဆိတ် တစ်အိတ်လုပ်၍ ဖော်ပြခြင်းဖြင့် မိမိတို့မီဒီယာတာဝန်ကျေပြွန်ပြီဟုယုံကြည်ပါသလား . .
၉။ နိုင်ငံအနှံနယ်စွန်နယ်ဖျားမကျန် ရိုးသားဆင်းရဲစွာဖြင့် ပညာရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော ဆရာ၊ဆရာမ အများစု၏ဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်၎င်း၊အစိုးရကျောင်းများဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သော်၎င်း မီဒီယာတာဝန်ကျေပြွန်စွာဖြင့်ဖော်ထုတ်ရေးသားခြင်းရန်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိပါသလား . .
၁။ ယခုပြဌာန်းသော ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဥပဒေကြောင့် နိုင်ငံတော်ပညာရေးမတိုးတက်နိုင်ပါ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းနေနိုင်သောသူများသည် စုစုပေါင်းကျောင်းသားဦးရေ၏(၁%)မျှသာရှိခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း အဖြစ်ပြောင်းလဲတည်ထောင်မည့်သူများသည် နိုင်ငံတော်၏ပညာရေးမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သော တီထွင်ဖန်တီးမှု များနှင့်ပြည့်ဝသော ကျောင်းသားဗဟိုပြု သင်ကြားရေးနှင့် ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးဆန့်ကျင်လျှက် စာမေးပွဲတွင် အမှတ်ကောင်းကောင်းဖြင့် အောင်မြင်ရန်အတွက်သာ ဦးတည်သင်ကြားကြခြင်း။
၂။ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတည်ထောင်မည့်သူများမှလည်း မိမိကိုယ်ကိုမိမိ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း တည်ထောင် နိုင်လောက်အောင်၊ အဖက်ဖက်မှပြည့်စုံလုံလောက်နေသေးခြင်းမရှိသေးပါ၊ အတွေ့အကြုံများစွာလိုအပ် နေပါသေးသည်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူကို အမှတ်များများဖြင့်အောင်မြင်ယုံမျှဖြင့်တော့ စိတ်ကူးယဉ်ရန်မသင့်ပါ။ မိမိတို့သည် ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို ပုံစံခွက်ဖြင့်လေ့ကျင့်ပေးနေတာလား . . ပညာတတ်အောင်စာသင်တာလား ခွဲခြားတတ်ဖို့တော့လိုသည်။ ပြီးတော့ ကြော်ညာကောင်းကောင်းဖြင့် လူကြားကောင်းယုံ၊ စာကြည့်တိုက်၊ သိပံလက်တွေ့ခန်း၊ မာတီမီဒိယာ၊ တစ်နှစ်မှတစ်ခေါက်လောက်သာ ဝင်ခွင့်ရမည့်အခန်းများနှင့်လည်းလှည့်စားရန်မသင့်ပါ၊ (သေချာပါသည် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အမှတ်ကောင်းကောင်းဖြင့်အောင်မှ ကိုယ့်ကျောင်းနာမည်ရမှာဖြစ်သဖြင့် စာမှလွဲ၍ ကျန်တာသည် အပြသက်သက်((င်္သမှ့သတ)သာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။)။
၃။ အစိုးရကျောင်းများတွင် ပိုက်ဆံကုန်ပြီးပညာမတတ်၍ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းပြောင်းထားလျှင် မိမိတို့ကလေး သေချာပေါက် ပညာတတ်ပြီလို့တစ်ထစ်ချယုံကြည်လျှင်၊ အစိုးရကျောင်းမှ ဆရာ၊ဆရာမများမှာ နိုင်ငံနှင့်အဝှမ်း သုံးမရလောက်အောင် ပျက်စီးနေပါပြီဟု ယုံကြည်လျှင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံပညာရေး ချောက်ထဲလုံးလုံး ကျသွားပြီဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွင်ထားသောကျောင်းသားတိုင်းလည်းမထူးချွန်ပါ၊ အောင်မြင်မှုလည်းမရပါ။ ပိုက်ဆံကတော့သောက်သောက်လဲကုန်ပါမည်။ (အစိုးရကျောင်းတွင်ထား၍ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွင်ထားခြင်းထက် ပိုက်ဆံပိုကုန်ပါက တိကျစွာပြောစေလိုပါသည်။ ကိုယ့်လိုအင်ဆနအတွက် လာဘ်ပေးရခြင်းနှင့်မဆိုင်ပါ)။ ယနေ့ရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးများတွင်လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်ချက်ကောင်း ကျောင်းများမှာ မိဘများကြိတ်ကြိတ်တိုးအပ်နေကြပါသည်။
၄။ စာသာမတတ်တာ တစ်တန်းပြီးတစ်တန်းတက်သွားတာ ဆရာဆရာမ မသင်ကြား၍မဟုတ်ပါ၊ အထက်မှတာဝန်ရှိသူများ ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း စဉ်ဆက်မပြတ်အကဲဖြတ် အတန်းတင်ဆိုသော ပညာရေးပေါ်လစီအမှားကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုယူဆပါသည်။(အတန်းတွင်းကောင်းကောင်းမသင်၊ ကျူရှင်ကြမှ ကောင်းကောင်းသင်၊ ကျူရှင်တက်မှ မျက်နှာသာပေး စုန်းပြူးအချို့ရှိနိုင်ပါသည်။) ၅။ ဒီဥပဒေဟာ နိုင်ငံတော်ပညာရေးတိုးတက်မှုအတွက် အရေးတကြီးမလိုအပ်သလို နိုင်ငံသားအများစု အတွက်လည်းကိုယ်စားမပြုပါဘူး။ နောင်တစ်ချိန်မှာ ပုဂုလိကအပိုင်းမှာခွင့်ပြုပြီး အစိုးရနဲ့လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အချိန်တစ်ခုယူပြီး စနစ်တကျတည်ဆောက် လိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွေက ကျွဲကူးရေပါဖြစ်သွားမှာပါ။ အရင်ဆုံးပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမှာက အစိုးရကျောင်းများဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ ခေတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်မကိုက်ညီတဲ့ကျူရှင်ဥပဒေပါ။
၆။ မီဒီယာများအနေဖြင့်လည်း ဆရာ၊ ဆရာမအချို့၏ ချို့ယွင်းချက်၊အားနည်းချက်များကို ဖော်ပြခြင်းဖြင့် မိမိတို့မီဒီယာတာဝန်ကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ကြသလို နိုင်ငံအနှံနယ်စွန်နယ်ဖျားမကျန် ရိုးသားဆင်းရဲစွာဖြင့် ပညာရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော ဆရာ၊ဆရာမအများစု၏လူနေမှုဘဝ တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး၊ အစိုးရကျောင်းများ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မီဒီယာတာဝန်ကျေပြွန်စွာဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ် ပညာရှင်များဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ရေးသားခြင်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား အသိပေးတင်ပြခြင်းကိုလည်း မပျက်မကွက်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုကြီးသောင်းရဲ့မျက်စေ့ထဲမှာတော့ မဝေးတော့တဲ့ကာလတစ်ခုမှာ မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးမှာ အစိုးရကျောင်းရော ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွေပါ အပြိုင်အဆိုင်ထွန်ကားလာပြီး၊ နိုင်ငံသားကောင်း ပညာတတ်တွေမွေးထုတ် လာနိုင်တော့မယ်ဆိုတာရယ်၊ ဒီထက်ပိုပြီး နိုင်ငံတွင်းမှာနေရာယူလာကြတဲ့ နိုင်ငံတကာကျောင်း (International School) တွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ဆက်လက်ကြိုးစားရဦးမယ်ဆိုတာပါဘဲ။( မှတ်ချက် - မြန်မာကျောင်းတွေမှာစာသင်တာစာမတတ်လို့ ပြည်တွင်းမှာ တရားမဝင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတကာကျောင်း (International School) တွေမှာ ပြောင်းထားလိုက်ရသူများအတွက်လည်း မိမိတို့ကလေးစာတကယ်တတ်/မတတ် ဒီကျောင်းတွေရဲ့အကောင်းအဆိုး သီးသန့်ဆောင်းပါးတစ်စောင် မကြာမီရေးသားပါမယ်)
ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးမှာ အကောင်းအဆိုးပေါက်ကွဲရင်ဖွင့် မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံပြည်ရေးတိုးတက်မှုအတွက်စိတ်ဝင်စားကြသူများလည်းကောင်း၊ မိမိတို့၏သားသားများကိုဖြစ်ထွန်းစေလိုသူ မိဘများအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ပညာရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမည် အစိုးရခန့်ဆရာ၊ဆရာမများနှင့် ကျူရှင် ဆရာများအားလုံး အိနိယနိုင်ငံ ဘောလိဝုဒ်မှ ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သော (3idiots ) ဇာတ်ကားအားကြည့်ရှု့၍ အခြေအနေများကိုနှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ကြည့်နိုင်ပါကြောင်း . . . ။
5/08/2012 09:23:00 PM
တပ်မ (၈၈) အတွင်း ရှိ မွေးမြုရေးကြက်ခြံ မှ အနံအသက်ဆိုးများ
တပ်မ (၈၈) အတွင်း ရှိ မွေးမြုရေးကြက်ခြံ
မကွေးမြို့ ၊ နတ်မောက်လမ်း ၊တပ်မ (၈၈) အတွင်း ရှိ မွေးမြုရေးကြက်ခြံ မှ အနံအသက်ဆိုးများအား ညအချိန် လျှက်စစ်ပန်ကာကြီးများဖြင့်မှုတ်ထုတ်
နေပါသည် ။ ထိုအနံအသက်မျာအား သိင်္ဂါ ရပ်ကွက်၏ အရှေ့ဖျားပိုင်းတွင်
နေထိုင်ကြသော ရပ်ကွက်နေပြည်သူများမှာ အနံအသက်ကြောင့် မျက်နှာ
များရောင်ရမ်းခြင်း ၊ အသက်ရူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများဖြစ်နေပါသည်။
၄င်းဖြစ်စဉ်အား ရပ်ကွက်အတွင်းနေပြည်သူများ လူအယောက် ( ၅၀ )ခန့်
၃.၄.၂၀၁၂ နေ့ ည- ၉း၀၀နာရီအချိန်တွင် သွားရောက်ပြောဆိုရန်သွားစဉ်
အမှတ် (၁) ရဲစခန်းမှ ရဲ မြို့နယ်မှုး နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတပ်သားများမှဝင်ရောက် တားစီးခဲ့ပါသည်။ ရပ်ကွက်သားများနှင်ရဲမျာ့းညိနိူင်း ပြီး တပ်တွင်းသို့သွားရောက်
ခဲ့ရာ ပြေလည်အောင်မဖြေရှင်းပေးပဲ နောက်ထပ်ပြုလုပ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင်
သေနတ်ဇြင့်ပစ်သတ်မည်ဟု ကြယ်သုံးပွင့်အဆင့်ရှိ လူမှ ခြိမ်းခြောက်
ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ကို တပ်တွင်းလိုက်သွားသော ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး
နှင့် ၊ ဆယ်အိမ်မှုး တို့မှ ပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါသည်။
5/08/2012 09:11:00 PM
လမ်းမတော် NLD ရုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းပြောကြားပြီး ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ (ရုပ်/သံ)
လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် ၀င်ရောက် အရွေးခံခဲ့ဖူးတဲ့ ရန်ကုန်မြို့၊
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က မိန့်ခွန်းပြောကြားပြီး ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
5/08/2012 08:30:00 PM
ဗန်းမော်-နမ့်ခမ်းလမ်း KIA မိုင်းပေါက်ကွဲမှု တွင် မြန်မာစစ်သား ၁၂ ဦး ကျ
မေ ၆ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့က မန်မော် (ဗန်းမော်)-နမ့်ခမ်းလမ်း ၂ နေရာတွင် မြန်မာအစိုးရစစ်ကြောင်းအား KIA မှ မိုင်းထောင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ စစ်သား ၁၂ ဦး သေဆုံးပြီး အချို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်များပြောသည်။မြန်မာစစ်သားများသည်
အင်အားပြင်းထန်သော အဝေးထိန်းမိုင်းများ (remote-controlled mines) ဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရပြီး သေဆုံးသူ ၃၀ ကျော်သည်ဟု သက်ဆိုင်ရာ KIA အရာရှိများက KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဒဏ်ရာရရှိသူများနှင့် အလောင်းများကို နမ့်ခမ်းဆေးရုံ နှင့် ကိုင်ထိပ် အစိုးရစစ်စခန်းသို့ တင်ဆောင်သွားသည် ဟု မျက်မြင်များဆိုသည်။ပထမ
မိုင်းပေါက်ကွဲမှုသည် မန်ဝင်းအနီး ကျောက်ဖြူတွင် နံနက် ၇ နာရီတွင်ဖြစ်ပွားပြီး ဒုတိယ ပေါက်ကွဲမှုသည် ကိုင်ထိပ်စစ်စခန်း အနီး ရှအူခက် (Sha-U Hkyet)၌ နံနက် ၁၁ နာရီတွင်ဖြစ်ပွားသည်ဟု မိုင်းအသံ ကြားရသူများက ပြောသည်။သေဆုံး ဒဏ်ရာရရှိသော စစ်သားများသည် မြန်မာစစ်တပ် တပ်မ အမှတ် ၉၉ မှ ဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့၏ ကိုင်ထိပ်စခန်းမှ နမ့်ခမ်းသို့ စစ်ကြောင်းထွက်လာချိန် KIA ၏ တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။၎င်းစစ်ကြောင်းအား
မန်ဂျေ (မံစီ) မြို့နယ်တွင် အခြေစိုက်သည့် KIA တပ်ရင်း (၁)နှင့် (၂၇) စစ်သားများ ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သက်ဆိုင်ရာ တပ်ရင်းနှစ်ရင်းမှ KIA အရာရှိများ KNG ကချင်သတင်းဌာန သို့ အတည်ပြုသည်။ယခုလို
KIA ၏ မိုင်းဖြင့် တားဆီးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် မြန်မာစစ်သားများ နမ့်ခမ်း သို့ မရောက်နိုင်ဘဲ မူလ ကိုင်ထိပ်စခန်းသို့ ပြန်ခေါက်သွားခဲ့ရကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
5/08/2012 08:21:00 PM
အစိုးရသစ် တက်လာပေမယ့် လယ်သမားတွေ ဆက်လက် အဖိနှိပ်ခံနေရတုန်းဘဲ ဖြစ်တယ်လို့ မတရားသဖြင့် တရားစွဲခံရပြီး တရားရုံးတက်နေတဲ့ ရသေ့တောင်မြို့နယ် နီပူခံ ကျေးရွာက လယ်သမား တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ " အစိုးရသစ် တက်လာတဲ့ အတွက် အသိမ်းခံထားရတဲ့
လယ်မြေတွေကို ပြန်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ အတွက် စစ်တပ်က သိမ်းယူထားတဲ့ ကိုယ့်လယ်တွေကို ကိုယ် ပြန်တက်တာနဲ့ စစ်တပ်ကျော့ထောက် နောက်ခံပြုထားတဲ့ စီးပွားရေး သမား ဦးစောအောင်သိန်းက ကျူးကျော်မူနဲ့ တရားစွဲလိုက်တဲ့ အတွက် အခု လယ်သမား ၂၆ ဦးဟာ တရားရုံး တက်နေရတယ်။ အရပ်သား အစိုးရလက်ထက်ရောက်မှ ဒီလို အဖြစ် ကြုံရတဲ့ အတွက် အထူး စိတ်ပျက်မိပါတယ် ။စစ်အစိုးရ လက်ထက်ကတောင် ဒီလိုမျိုး လယ်သမားတွေကို တရားစွဲဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။" နီပူခံကျေးရွာမှ အမည်မဖေါ်လိုသူ လယ်သမားကြီးဟာ မနေ့က (မေလ ၆ ရက်)နေ့က ရသေ့တောင်မြို့နယ် တရားရုံးမှာ ရုံးချိန်း ရှိတဲ့ အတွက် တခြား လယ်သမားကြီး ၂၅ ဦးနဲ့ အတူ တရားရုံးကို တက်ရောက်လာစဉ်မှာ သူ့အမြင်ကို နိရဉ္စရာသို့ ပြောကြားသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ " ကျွန်တော် လယ်သမား ၂၆ ဦးက ရသေ့တောင်မြို့ နယ် မေယူကမ်းမှာ တည်ရှိတဲ့ နီပူခံ၊ ကောင်းရီချောင်း၊ ကျွန်းချောင်းနဲ့ ပေါင်းစား ကျေးရွာက ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်တာက စစ်တပ်က ကျွန်တော်တို့ ရွာသားတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ လယ်ဧက ၁၈၀၀ ကို ၁၉၉၆
ခုနှစ်က စစ်တပ် အထက်အမိန့်အရ မြေလွှတ် မြေရိုင်းတွေ ဖေါ်ထုတ်တဲ့ အခါ ကျွန်တော်တို့ ဓါးမ ဦးချ လုပ်ကိုင်လာတဲ့ လယ်ဧက ၁၈၀၀ ကို မြေလွှတ် မြေရိုင်းတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး အတင်း ဓမ္မ သိမ်းယူသွားပါတယ်။ အစိုးရသစ် တက်လာတဲ့အခါ အဲဒီလယ်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ဘိုးစဉ် ဘောင်ဆက် လုပ်ကိုင်လာတဲ့ လယ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်လို့ တင်ပြတဲ့ အတွက် ရခိုင် ၀န်ကြီး အဖွဲ့က လာရောက်စစ်ဆေးတဲ့ အခါ စစ်တပ်က သိမ်းဆည်းတာက လယ်ဧက ၇၅၀ သာ ဖြစ်တယ်။ ကျန်တဲ့ မြေတွေ မပါဘူးလို့ ပြောတဲ့ အတွက် ကိုယ့်လယ်ပေါ် ကိုယ်ပြန်တက်တော့ စောအောင်သိန်းက ပိုင်နက်ကျူးကျော်မူ၊ ပုဇွန် ခိုးမူ၊ သူတပါး အကျိုးစီးပွား ပျက်စီးစေမူနဲ့ လောင်းချောင်း ရဲစခန်းမှာ တရားစွဲ ပြီး အမူဖွင့်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့က အခု တရားခံတွေ အဖြစ်နဲ့ ရုံးတက်နေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။" သိမ်းယူစဉ် လယ်သမားတွေက လယ်တွေကို မပေးလိုတဲ့ အတွက် လယ်သမား အများအပြားကို စစ်တပ်က ကြိုးနဲ့ တုတ်ပြီး ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မူတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်း အဲဒီ လယ်သမား အမူကို လိုက်ပါ ကူညီနေတဲ့ ရသေ့တောင်မြို့ပေါ်က ပညာတတ် လူငယ် တစ်ဦးကလည်း ပြောပါတယ်။ " ပြောရရင်တော့ဗျာ။ စစ်တပ်ထဲက အကျင့်ပျက် အရာရှိ တချို့နဲ့ ဦးစောအောင်သိန်းက တပ်မတော်ကို အသုံးချပြီး ကိုယ်ကျိုး အတွက် လုပ်စားနေကြတာ
ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်က သိမ်းယူတာက လယ်ဧက ၇၅၀ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်ကနေ ဦးစောအောင်သိန်းကို သိမ်းတဲ့ လယ် ၇၅၀ ဧက ကို ဌားတော့ သူက ဘယ်လို လူလည်ကျသလဲ ဆိုရင် စစ်တပ် သိမ်းတဲ့ အထဲမှာ မပါတဲ့ လယ်တွေကိုလည်း စစ်တပ်က သိမ်းတဲ့ အထဲမှာ ပါတယ်ဆိုပြီး စစ်အရာရှိ တချို့ကို ပိုက်ဆံပေး ချဉ်းကပ်ပြီး
လယ်ဧက ၁၈၀၀ ထိကို သိမ်းယူပြီး တစ်ဦးတည်းပိုင် လုပ်စားနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လယ်မပေးတဲ့ လယ်သမားတွေကို အကျင့်ပျက် စစ်အရာရှိ တချို့နဲ့ ပေါင်းပြီး ကြိုးနဲ့ တုတ်ကာ နှိပ်စက်မူတွေလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်က စပြီး အဲဒီ လယ်မြေတွေကို စစ်တပ်ဆီက ဌားပြီး ဦးစောအောင်သိန်း လုပ်စားနေတာ ဒီနေ့ထိပါဘဲ။" အခုလို လယ်သမားတွေကို နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ အပြင် အခုအခါမှာလည်း တရားသူကြီးတွေကို
ပိုက်ဆံပေးပြီး အမူကို ကြန့်ကြာအောင် လုပ်နေတယ်လို့ လယ်သမား တစ်ဦးက စွပ်စွဲ ပြောဆိုပါတယ်။ " ကျွန်တော်တို့ကို တရားရုံးတင်ပြီး အမူ စစ်တာက မတ်လ ၉ ရက်နေ့က ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်ထိ ရုံးတက်ရတာကတော့ ၆ ကြိမ် နီးပါး ရှိခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ တရားခံတွေကို တစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုမှ တရားရုံးက မစစ်ဆေးသေးဘူး။ တရားလိုဘက်က လိုပြသက်သေတွေကိုဘဲ စစ်ဆေးနေပါတယ်။ တရားလိုပြ သက်သေကလည်း ၁၆ ဦးမှာ ၆ ဦီးကိုသာ စစ်ဆေးပါသေးတယ်။ ဒါက ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် အမူကို အချိန်ဆွဲပြီး ကျွန်တော်တို့ လယ်သမား ၂၆ ဦးကို အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက် ဖြစ်အောင် ဦးစောအောင်သိန်းက စီစဉ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရက်တလေဆိုရင် တရားလိုတွေ မလာတဲ့ အတွက် အမူ မစစ်ဘဲ အိမ်ကို ပြန်သွားရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။" လယ်သမား ၂၆ ဦးဟာ သူတို့ရွာတွေက စက်လှေနဲ့ မေယူမြစ်ကို ဖြတ်ပြီး ရုံးလာတက်ရတဲ့ အတွက် ငွေတွေလည်း အရမ်းကုန်ကျနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ လူတစ်ဦးအသွား အပြန် စက်လှေခ ၁၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး တရား စစ်ဆေးပြီးတာနဲ့ အိမ်ကို မပြန်နိုင်ဘဲ ရသေ့တောင်မြို့ပေါ်မှာဘဲ အိပ်ရတဲ့ အတွက် စားစရိတ်၊ တည်းခို စရိတ် စသဖြင့် ငွေကုန်ကြေးကျ အထူးများနေရတယ်လို့ နောက်ထပ် လယ်သမား တစ်ဦးကလည်း ပြောပါတယ်။
" ကျွန်တော်တို့ လယ်သမားတွေမှာ တရားရုံးကို အဝေးကြီးက စက်လှေနဲ့ လာရတဲ့ အတွက် အခက်အခဲတွေ အများကြီး ကြုံနေရပါတယ်။ ထောင်ချမယ်ဆိုရင်လည်း ချလိုက်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီလို တရားရုံးတက်ရတာကိုတော့ မလိုချင်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အထက်လူကြီးတွေကို ပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ လယ်သမားတွေကို သနားငဲ့ညှာသောအားဖြင့် အမူကို အမြန်ဆုံး ပြီးပြတ်အောင် စီရင်ချက် ချစေလိုပါတယ်။” နောက်ဆုံး ရရှိတဲ့ သတင်းအရ အဲဒီ ဒေသက လယ်သမား နောက်ထပ် ၁၉ ဦးကိုလည်း လယ်မြေတွေကို ပြန်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့ အတွက် စစ်တပ် နောက်ခံပြုထားတဲ့ စီးပွားရေး သမားတွေက တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အခုလို လယ်သမားတွေကို
အစုလိုက် အပြုံလိုက် တရားစွဲခံရတာကတော့ ရခိုင်ဘက်မှာ အခုတစ်ကြိမ်ဟာ အများဆုံးအရေအတွက် ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နိရဉ္စရာ
5/08/2012 08:13:00 PM
ဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့သစ် ဖွဲ့စည်း
တိုင်းရင်သား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပြုလုပ်ရန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ဗဟိုကော်မတီနှင့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ အဖွဲ့သစ်ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် (ဓာတ်ပုံ - Tomohiro Ohsumi / Bloomberg)
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ဗဟိုကော်မတီကို ဦးသိန်းစိန်က ဥက္ကဌ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး ဒု သမ္မတ နှစ်ဦး၊ လွှတ် တော် ဥက္ကဋ္ဌ နှစ်ဦး၊ ကာကွယ်
ရေးဦးစီးချုပ် ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ နယ်စပ် ရေးရာ ၀န်ကြီး၊ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်နှင့် သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းဇော် အပါအ၀င် ၁၂ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတ ရုံး နှင့် နီးစပ်သည့် အသိုင်းအ၀ိုင်း က ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့၌ ဒု သမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း က ဥက္ကဌ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းဇော်က ဒု ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး ဒု တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး
စိုးဝင်း၊ ရထား ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ၀န်ကြီး ၇ ဦး၊ ပြည်နယ်/တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ၁၀ ဦး၊ ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ၁၀ ဦး၊ နယ်စပ်ရေးရာ ဒု ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် ဇော်ဝင်းနှင့် ဒု ရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး အပါအ၀င်၂ ဦး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၉ ဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၉ ဦး၊ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်မျိုးကြည် အပါအ၀င် စုစုပေါင်း ၅၂ ဦးဖြင့် ဖွဲစည်းထားကြောင်း သမ္မတ ရုံး အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သတင်းရသည်။
ယခုကဲ့သို့ အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ကို ပြင်ဆင်၍ အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခြင်းသည် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
“အခုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီအဖွဲ့နှစ်ခုက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေအားလုံးနဲ့ထာဝရငြိမ်းချမ်း ရေးရတဲ့အထိ အစိုးရသက်တမ်းမကုန်ခင် ငြိမ်းချမ်းရေးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်” ဟု သမ္မတရုံးမှ အမည်မဖော်လိုသော အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီသည် ပထမဆင့်အနေနှင့် ပြည်နယ်အဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး၊ နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှု ညှိုနှိုင်းရရှိထားသည့် သတ်မှတ်နေရာများတွင် နေထိုင်ရေး၊ သတ်မှတ် နေရာများအပ အခြားဒေသသို့ လက်နက်ဖြင့်သွားလာခြင်းမပြုရန်၊ ဆက်ဆံရေးစခန်းကို နှစ်ဖက်သဘောတူညီသော သင့်လျော် သည့်နေရာများတွင် လက်နက်မပါဘဲ ထားရှိရေး၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲနှင့် ဆွေးနွေးရန် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ တရားဝင်ဖွဲ့စည်းပေးရန်နှင့် ဆွေးနွေးမည့် အချိန်နှင့်နေရာ ညှိုနှိုင်းရေးများကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
ယခင်က အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့ကို ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သော အဖွဲ့နှင့် ဦးအောင်သောင်း ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ဟူ၍ နှစ်ဖွဲ့ ထားရှိရာ ဦးအောင်သောင်း အဖွဲ့သည် ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့(KIO)နှင့် ဆွေးနွေးရာတွင် အောင်မြင်မှု မရရှိသေးပေ။ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းလိုက်သော အစိုးရ အငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့တွင်း ဦးအောင်သောင်း ပါဝင်ခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
အစိုးရက ရှမ်းပြည် တပ်မတော် တောင်ပိုင်း(SSA-S) ၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း(SSA-N)၊ ကရင်အမျိုးသား အစည်း အရုံး (KNU)၊ မွန်ပြည်သစ် ပါတီ၊ တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင် အမျိုးသား တပ်မတော်(DKBA) ကလို့ထူးဘော အဖွဲ့၊ ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပါတီ(KNPP) စသည်ဖြင့် ၁၀ ဖွဲ့ထက်မနည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စပို့ရပြီ
ပြည်ပကိုခရီးသွားဖို့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စပို့ရပြီလို့ NLD ပါတီကပြောဆို ကြောင်း AFP သတင်းမှာ ရေးထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ပတ်စပို့ရပြီလို့ သောကြာနေ့က အကြောင်းကြားလာပါတယ်-အခုတော့ ပတ်စပို့က ဒေါ်စုလက်ထဲရောက်နေပါပြီလို့ NLD ပါတီ ပြောခွင့်ရ ဦးဥာဏ်ဝင်းက AFP သတင်းဌာနကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လာမဲ့ဇွန်လမှာ နော်ဝေးနဲ့ ဘရစ်တိန်နိုင်ငံတွေကို ခရီးသွားဖို့ရှိပြီး ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ ဂျပန်ကိုသွားရောက်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
5/08/2012 07:52:00 PM
ဒုသမ္မတဦးတင်အောင်မြင့်ဦး နေရာ စစ်တပ်ကပဲပြန်ခန့် ရမယ်
သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး နှုတ်ထွက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုမေလကုန်မှာ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကို အရေးပေါ် ခေါ်ယူဖို့အာဏာပိုင်တွေက စီစဉ်နေကြောင်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ လောလောဆယ်အထိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို တရားဝင်စာနဲ့ အကြောင်းကြားတာ မရှိသေးပေမယ့် ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးနှုတ်ထွက်မှု နဲ့ပတ်သက်လို့ ဒီလထဲမှာ အရေးပေါ် လွှတ်တော်ခေါ်ယူဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေ များတယ်လို့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က ပြောပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအရေးကို အရေးပေါ် ခေါ်ယူမယ်ဆိုရင် လွှတ်တော်အမတ်တွေကို ၁၅ ရက် ကြိုတင်အကြောင်းကြားရဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒုတိယသမ္မတ-၁
သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးဟာ တပ်မတော်က တင်မြှောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် လစ်လပ်သွားတဲ့ သူ့နေရာအတွက် တပ်မတော်ကဘဲ ပြန်လည် ခန့်အပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
5/08/2012 07:41:00 PM
ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး သတင်း ဂျာနယ်တွေမှာ ရေးသားဖော်ပြခွင့် ပိတ်ပင်
ဒုတိယသမ္မတ သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး နှုတ်ထွက်စာတင်တဲ့ သတင်းကို ပြည်တွင်းထုတ် ဂျာနယ်တွေမှာ ရေးသားဖော်ပြခွင့် ပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခုတစ်ပတ်ထုတ်ဝေမယ့် Venus ဂျာနယ်မှာ ရေးသားထားတဲ့ ဒီသတင်းကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရင် အရေးယူခံရ မယ်ဆိုပြီး စာပေစိစစ်ရေးဌာနက ပိတ်ပင်ဟန့်တားလိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ Venus ဂျာနယ်ရဲ့ တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ ကိုသာလွန်ဇောင်းထက်က RFA ကို ဒီကနေ့ အတည်ပြု ပြောကြားပါတယ်။ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး နှုတ်ထွက်တဲ့သတင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ထုတ် Myanmar
Post ဂျာနယ်က စာပေစိစစ်ရေးကို မတင်ပြဘဲ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့အတွက် အရေးယူမယ်လို့ စာပေစိစစ်ရေးအာဏာပိုင်တွေက အယ်ဒီတာအဖွဲ့ကို ခေါ်ယူသတိပေးထားကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒီအတောအတွင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန် ၂၀၁၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ အနားယူမယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးအကြံပေး ဦးကိုကိုလှိုင်ရဲ့ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားပြီး Venus ဂျာနယ်က ဒီကနေ့ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက် စာပေ စိစစ်ရေးရုံးက ခံဝန်လက်မှတ်ထိုးဖို့ ဆင့်ခေါ်ထားတယ်လို့ Venus ဂျာနယ် တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ကိုသာလွန်ဇောင်းထက်က ပြောပါတယ်။ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးသတင်းတွေ ရေးသားခွင့် ပိတ်ပင်ထားတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ RFA က စာပေစိစစ်ရေးဌာန တာဝန်ရှိသူတွေ ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့် အဆက်အသွယ်မရခဲ့ပါဘူး။
5/08/2012 07:39:00 PM
မြေမြုပ်မိုင်းကြောင့် မသန်မစွမ်းဖြစ်ရသူတွေဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ မသန်စွမ်းတာကို ဖော်ပြနေတာဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြား
မြေမြုပ်မိုင်းကြောင့် မသန်မစွမ်းဖြစ်ရသူတွေဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ မသန်စွမ်းတာကို ဖော်ပြနေတာဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်မှာ ဒီကနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်း(မြန်မာ) ရဲ့ မသန်မစွမ်းသူများ ဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ "မြေမြူပ်မိုင်းထိလို့ မသန်စွမ်းသူများဆိုတာဟာ ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ တကယ့်
မသန်စွမ်းချက်တခုကို ဖော်ပြနေတယ်။ အဲဒါဟာ အချင်းချင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လိုနေတဲ့ကိစ္စပါ။ တကယ့်မသန်စွမ်းတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာ ကျွန်မတို့ ပြန်ပြီး စဉ်းစားစရာရှိတယ်။ မြေမြူပ်မိုင်းထိလို့ မသန်စွမ်းတဲ့သူတွေက မသန်စွမ်းတာလား။ ဒီမြေမြုပ်မိုင်းကို မြုပ်တဲ့သူတွေက မသန်စွမ်းတာလား။ မြေမြုပ်မိုင်းတွေ မြုပ်ရမဲ့ အခြေအနေကိုပျောက်ကွယ်သွားအောင် မလုပ်နိုင်တဲ့
ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ မသန်စွမ်းတာလားဆိုတာ ကျွန်မတို့အားလုံး စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ " အခန်းအနားမှာ မသန်မစွမ်းသူများအပါအ၀င် အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ် ထူထောင် ရေးမှာ နိုင်ငံသား အားလုံး
တာဝန်ရှိသလို မသန်မစွမ်းသူတွေ ရဲ့ မိသားစုဘ၀ တိုးတက်မြင့်မားရေး အတွက် နိုင်ငံသား အားလုံးက ပံ့ပိုးကူညီ လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့ အရေးကြီးကြောင်းလဲ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ပြောသွားပါတယ်။ ဒီအခမ်းအနားကို သီတဂူဆရာ တော်ကြီးအပါအ၀င်၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုဌေးကြွယ် နဲ့ တခြားနိုင်ငံရေး လူမှုရေးခေါင်းဆောင်တွေလည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားမှာ ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်း(မြန်မာ)က မသန်မစွမ်းမိသားစုတွေအတွက်
ဘီးတပ်ကုလားထိုင်တွေ လှူဒါန်းပေးအပ်ခဲ့သလို ဂုဏ်ပြုအမှာစကားပြောကြားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုလင်းပန်းချီ နဲ့ ပြန်လည်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်၊
5/08/2012 07:37:00 PM
ဆေးကုသပေးရန်ငြင်းဆန်ပြီးနောက် ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်း သေနတ်ပစ်ခံရ
မေလ ၈ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်-ဆိုင်းဆွတ် (YPI)
မနက် ၈နာရီခန့် က ကချင်ပြည်နယ် ဆားမှော် အနောက်ဘက် ကျွန်းသုံးလုံးကျေးရွာ က
NGO ၀န်ထမ်းတစ်ဦးကို ကေအိုင်အို တပ်ဖွဲ့မှဟု ယူဆရသော သေနတ်သမားနှစ်ဦး က သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်သွားကြောင်း ၎င်း၏ မိသားစုက ပြောသည်။
အန်ဂျီအို ၀န်ထမ်း တစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုဇော်မိုးနိုင် ကို ကျွန်းသုံးလုံးကျေးရွာမှ မိုးကောင်းမြို့ အသွားတွင် အသက် ၂၀ ၀န်းကျင် အရပ်ဝတ် လူနှစ်ဦးက သေနတ်ဖြင့် ၅ချက် ပစ်ခတ်သွားကြောင်း ကိုဇော်မိုး ဖခင်ဖြစ်သူက YPI ပြောသည်။
“သားကြီးကို အရပ်ဝတ်နဲ့လူနစ်ယောက်က ဆိုင်ကယ် တစ်ယောက်တစ်စီးနဲ့ သေနတ်လည်း တစ်ယောက်တလက်ကိုင်ပြီး သူကို ပစ်သွားတာ ကျွန်တော်ရှေ့မှာ ဒီလူနှစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်သေးတယ် ဆိုင်ကယ်အရမ်းမောင်းသွားတာ” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
အဖွဲ့ဟု ယူဆရသော လက်နက်ကိုင်နှစ်ဦးက လွန်ခဲ့သည် ၃ရက် ခန့်က ကိုဇော်မိုးနိုင်အား ဖျားနားသူ တစ်ယောက် ကို ဆေးလာကုပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း ကိုဇော်မိုးနိုင် အနေဖြင့် ဖမ်းဆီးထားမည်ကိုစိုးရိမ်သဖြင့် သွားရောက်ကုသပေးရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်ဟု ဖခင်ဖြစ်သူက ပြောသည်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ရက်လောက်ကတော့ သားကြီးကို ဆေးလာကုပေးဖို့ခေါ်တယ် သူကလည်း မအားဘူးလို့ပြောပြီး မသွားတာ သူကိုဖမ်းထားမည်ဆိုတာ သိလို့ မသွားတော့ အခုလိုဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်” ဟု ဖခင်ဖြစ်သူက ပြောသည်။
လည်ပင်း ရင်ဘတ်နှင့် ပေါင်များတွင် ကျဉ်ဆံမှန်ထားသည့် ကိုဇော်မိုးနိုင်မှာ ယခုလောလောဆယ် မြစ်ကြီးနားဆေးရုံတွင်
ဆေးကုသမှုခံယူလျှက်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ယခင်က ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းတွင် စည်းရုံးရေးမှူး တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ။
5/08/2012 07:34:00 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဒု-သမ္မတ ခန့်အပ်လိုပါက အခြေခံဥပဒေပြင်မှဖြစ်မည်
မေလ ၈ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်-ဟံသာ (YPI)
ဒု-သမ္မတ သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး နှုတ်ထွက်မည်ဆိုသည့် သတင်းများထွက်ပေါ်လျှက်ရှိရာ အကယ်၍ ၎င်းနေရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ခန့်အပ်မည်ဆိုပါက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပြီးမှ သာလျှင် ခန့်အပ်ခွင့်ရှိမည်ဟု လွှတ်တ်ာကိုယ်စားလှယ်များက ပြောဆိုသည်။
သတင်းပေါ်မှာ အခြေခံပြီး လူတိုင်းကစိတ်ဝင်စားနေတာက ကျွန်တ်ာတို့ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒု-သမ္မတ နေရာ တင်မယ်ပေါ့ အကယ်လို့ တင်မယ်ဆိုရင်တောင်
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကိုပြင်မှပဲရမယ် အခြေခံဥပဒေနဲ့ ငြိနေတာတွေရှိတယ်" ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုးက ၀ိုင်ပီအိုင်သို့ ပြောသည်။
အလားတူ ဥပဒေပညာရှင်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်ကလည်း " ဒေါ်စု တင်မယ်ဆိုရင် ဒု-သမ္မတက စစ်ရေးအမြင်ရှိရမယ် ဆိုတာပါနေတယ် နောက် သူ့သားတွေခင်ပွန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံမှာ ငြိနေတာတွေရှိတယ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအရဆိုရင်
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအခန်း(၃) ပုဒ်မ (၅၉)(စ)အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတ များ၏ အ
ရည်အချင်းများတွင် မိမိကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ မိမိ၏ မိဘတစ်ပါးပါး သော်လည်းကောင်း၊ မိမိ၏ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းသော် လည်းကောင်း၊ မိမိ၏ တရားဝင် သားသမီးသားသမီး တစ်ဦးဦးသော်လည်းကောင်း ၊ထိုတရား ၀င်သားသမီး တစ်ဦးဦး၏ ဇနီး သို့မဟုတ်ခင်ပွန်း သော်လည်းကောင်း နိုင်ငံခြားအစိုးရ ကျေးဇူးသစ္စာတော်ကို ခံယူစောင့်ရှောက် ရိုသေသူ သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ လက်အောက်ခံ ဖြစ်သူ သို့မဟုတ် တိုင်းတစ်ပါး၏ နိုင်ငံသားဖြစ်သူများ မဖြစ်စေရ၊ ထိုသူများသည် နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ လက်အောက်ခံဖြစ်သူသော်လည်းကောင်း ၊ တိုင်းတပါး၏ နိုင်ငံသားသော်လည်းကောင်း ခံစားရသော အခွင့်အရေးများနှင့် ကျေးဇူးခံစားခွင့်များကို ခံစားနိုင်ခွင့်ရှိသူများ မဖြစ်စေရဟုပါရှိသည်။
လတ်တလော သတင်းများထွက်ပေါ်နေသော ဒု-သမ္မတ သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးသည် အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့် ပြည့်သူ့လွှတ်တော် နှစ်ရပ်အတွင်းရှိ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က အမည် စာရင်း တင်သွင်းသည့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အစုအဖွဲ့မှ ရွေးချယ်တင်သွင်း ထားသူ ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ၎င်းနှုတ်ထွက်ပါက ယင်းတပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကသာ ဒု-သမ္မတကို ပြန်လည် ရွေးချယ်တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
စစ်တပ်က လာတဲ့သူတယောက်ယောက် ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ဒေါ်စုကို ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ရွေးချယ်ချင်ရင် ရွေးလို့ရပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒေါ်စုကိုရွေးချယ် တင်မြောက်မယ်ဆိုရင် သူ့ခင်ပွန်းသူ့သား တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ငြိနေတဲ့အတွက် နာမည်စာရင်း တင်ပြတဲ့နေရာမှာပဲကို ပြုတ်ကျသွားနိုင်ပါတယ် "ဟု ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုးက ဆိုသည်။
(၁) နှင့်(၂) နှစ်ဦးရှိပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ဒု-သမ္မတ (၁) အနာယူသွားပါက ဒု-သမ္မတ(၂) မှာ (၁) ဖြစ်လာပြီး နောင်ရွေးချယ်မည့် ဒုသမ္မတမှာ (၂) ဖြစ်လာမည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ လက်ရှိဒု-သမ္မတများမှာ သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးမှာ (၁)ဖြစ်၍ ဒု-သမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းမှာ (၂)ဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အခန်း(၃) ပုဒ်မ (၇၂) အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတသို့မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတစ်ဦးဦးသည် မိမိ၏ ရာထူးသက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ မိမိဆန္ဒ အရနှုတ်ထွက်လျင် နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရမည်ဟု ပါရှိသည်။
အကယ်၍ ဒု-သမ္မတ နှုတ်ထွက်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် ပုဒ်မ (၇၂)(စ) အရ ဒုတိယ သမ္မတ ရာထူးနေရာလစ်လပ်လျင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ကျင်းပချိန်ဖြစ်ပါက ယင်းဒုတိယသမ္မတကို ရွေးချယ် တင်မြောက်ပေးခဲ့သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အစုအဖွဲ့က ခုနှစ်ရက်အတွင်း ဒုတိယ သမ္မတ တစ်ဦးရွေးချယ်တင်မြောက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အကြီး အမှူးထံ ဆောလျင်စွာ အကြောင်းကြားရမည်ဟုပါရှိသည်။
(၇၂)(ဆ) အရ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကျင်းပချိန်မဟုတ်လျှင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အကြီးအမှူးသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတဧ။်အကြောင်းကြားစာရှိသည့်နေ့မှစ၍ ၂၁ ရက်အတွင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကို ခေါ်ယူပြီး သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အစုအဖွဲ့ က ဒုတိယသမ္မတ တစ်ဦး ကို ရွေးချယ်တင်မြောက်ရေး အတွက်သတ်မှတ်ထားသည့်နည်းလမ်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဟုပါရှိသည်။
ဒု-သမ္မတ(၁) နှုတ်ထွက်မည်ဆိုသည့် ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းမှ စ၍ ဗီအိုအေမြန်မာပိုင်း သတင်းဋ္ဌာနနှင့် ရိုက်တာသတင်းဋ္ဌာနတို့မှ ရေးသားဖေါ်ပြလျှက်ရှိသော်လည်း ယနေ့ထိ တရားဝင် ကြေညာချက် တစုံတရာ ထွက်ပေါ်မလာသေးပေ။
အစိုးရလက်ထက်က အတွင်းရေးမှူး (၁) တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင်
အခြားသော တပ်မတော်အရာရှိကြီးများနှင့်အတူ တပ်မတော်မှ အနားယူခဲ့သည်။
ကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်မှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးခံရပြီး အစိုးရအဖွဲ့တွင် ဒုတိယ သမ္မတအဖြစ် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း သဘောထား တင်းမာသူ၊ တရုတ်နိုင်ငံမှ စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီများနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိသူအဖြစ် သိရှိထားကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး စီမံကိန်းများကို စီမံခန့်ခွဲလျှက်ရှိသူ ဖြစ်သည်။ ။
ဒုတိယ သမ္မတ သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး (ဓါတ်ပုံ Reuters)
5/08/2012 07:25:00 PM
ဖားကန့် ဒေသမှာ KIA ဆက်ကြေးကောက်နေ
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့် ဒေသရှိ ကျောက်မျက်ကုမ္ပဏီများကို KIA တပ်ရင်း(၆)ကနေ မေလ(၁)ရက်နေ့ ၂၀၁၂ မှစပြီ ဆက်ကြေးတောင်းခံတဲ့ စာများပေးပို့ ထားကြောင်းသိရပါတယ်။KIA မှ တောင်းခံထားတဲ့ ဆက်ကြေးနှုန်းထားများမှာ --၁။ ၆ ဘီး - ငါးရံခေါင်း(ဒမ်ထရပ်) = 1,500,000၂။ ၁၀ ဘီးကား = 800,000၃။ ၁၂ ဘီးကား = 1,000,000၄။ Back Hole အား ၂၀၀ နှင့် ၃၀၀ ကြား = 1,000,000 ၅။ Back Hole အား ၃၀၀ နှင့် ၅၀၀ ကြား = 1,000,000၆။ Back Hole အား ၅၀၀ အထက် = 2,000,000၇။ ကျင်းသား (တစ်ယောက်) = 2000၈။ ကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက် အခွန် = 5,000,000၉။ ယူဒါ+Dozer = 200,000၁၀။ ပါဂျဲရို+ဖိုးဝှီး+ထပ်ကား = 300,000၁၁။ လုပ်ပိုင်ခွင့် = 3,000,000စတဲ့ နှုန်းထားများသတ်တောင်းခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ KIA ငြိမ်းချမ်းရေးမလုပ်ခင်တုန်းကလည်း ဖားကန့် ဒေသရှိ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း အားလုံးကနေ KIA က ဆက်ကြေးကောက်ခံခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုအစိုးရနဲ့ ငြိမ်းရေးပျက်ပျယ်သွားပြီး တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်ပွါးလာချိန်မှာ KIA က ဆက်ကြေးပြန်ကောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းတွေအပြင် လောင်းကစားဝိုင်းများနဲ့ တခြားစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆက်ကြေးတောင်ခံစာပို့ ထားကြောင်း ဖားကန့် ဒေသခံတွေဆီကနေMyanmar News Now မှ စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။
ကျောက်မျက်ကုမ္ပဏီတွေကို KIA မှာ ပေးပို့ ထားတဲ့ ဆက်ကြေးနှုန်းထားများဖြစ်ပါတယ်။
5/08/2012 10:48:00 AM
ကျွန်ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာတွေကို နွံနစ်အောင်လုပ်ရက်သလား
ဘန်ကောက် မြန်မာသံရုံးမှာ စာအုပ်သက်တမ်းတိုးမပေးတော့ဘူး……….
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာ နေထိုင်အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာအလုပ်
သမားတွေ ယာယီပါတ်စပို့ကိစ္စ၊ အလုပ်လုပ်ခွင့် လက်မှတ်(work permit) ကိစ္စနဲ့ အလူးအလိမ့်ခံနေကြရတာကို လူသိ နတ်သိဖြစ်တယ်။ အဲဒါတွေမလုပ်ရင်
ထိုင်းမှာ နေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လို့ မရတာကြောင့် မလုပ်ချင်ပေမယ့်
မြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာ အန္တရာယ်များတဲ့အလုပ်၊ ညစ်ပတ်တဲ့အလုပ်၊
ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ စပယ်ရှယ်စားပြီး
စတိုင်ကျကျ လုပ်ကိုင်ကြရတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလူတန်းစားကို
ထိုင်း/မြန်မာအစိုးရနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက ဂုတ်သွေးစုတ်လို့ ကောင်းတဲ့
လူတန်းစား အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတယ်။ အလုပ်သမား ၄သန်းဆိုတဲ့
ဒီလိုပြောရခြင်းဟာ ပြောသင့်လို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြောခြင်း
မဟုတ်ဘူး။ ပတ်စပို့လုပ် WP လုပ် ရက်ပေါင်း ၉၀ ဧည့်စါရင်းတိုင် နဲ့ မြန်မာ
အလုပ်သမားတွေ ကျွန်ခံသမျှ ပိုက်ဆံတွေ ထိုင်းမှာကုန်နေကြပြီဖြစ်တယ်။
သေလုမျောပါး ဖြစ်နေ ကြရတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို အယင်တုန်းက
မြန်မာအစိုးရ ၀ါဇီစက်က ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အနီရောင် အဖုံးနဲ့ ယာယီ ပတ်စပို့
တစ်အုပ်ကို ဘတ်ငွေ ၁၀၀ နုန်းထားနဲ့ထုတ်ပေးခဲ့တယ်။ စာအုပ်၂ နှစ်
သက်တမ်း ကုန်သွားတော့ စာအုပ်သက်တမ်းတိုးခ အဖြစ် မြန်မာသံရုံးက
ယူတာက ဘတ် ၁၅၀ ပေးရ ပါတယ်။ မြန်မာသံရုံးက စတေကာ ကပ်ပြီး လုပ်ပေးတာကြောင့် မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ကိုယ်တိုင် လာစရာမလိုပဲ
အခြားလူနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ကြားပွဲစားတွေလည်း
စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဘတ် ၅၀ ဒါမှမဟုတ် ဘတ်၁၀၀ လောက်စီ အမြတ်ယူပြီး
လုပ်ပေးကြတယ်။ ဘာပဲပြောပြော အလုပ်သမားတွေ အလုပ်လည်း မပျက်ဘူး။
စားစရိတ်နဲ့ သွားစရိတ်တွေ မကုန်ဘူးလို့ အလုပ်သမားတွေက ပြောကြတယ်။
အနီရောင်ပတ်စပို့ မြန်မာအစိုးရ၀ါဇီစက်ရုံက ထုတ်ပေးတဲ့ အနီရောင်
ပတ်စပို့ နဲ့ တောင်မှ အကုန်အကျ များလွန်းလို့ စိတ်ညစ်နေကြရတဲ့ မြန်မာ
အလုပ်သမားတွေကို ယခု တစ်ပူပေါ်နှစ်ပူ ဆင့်လာတဲ့ လုပ်ရပ်က
ပေါ်လာပြီးဖြစ်တယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ Trust Link ကုမ္ပဏီက လာရောက်ပြီး
တော့ ခရမ်းရောင် အီလက် ထရွန်နစ် ပတ်စပို့စာအုပ် တစ်အုပ်ကို ဘတ်ငွေ
၅၅၀ နဲ့ ထုတ်ပေးနေတယ်။ မြန်မာအလုပ်သမားဒုဝန်ကြီး ဦးမြင့်သိန်း
၂နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့ အနီရောင် ပတ်စပို့ကို ဘန်ကောက် မြန်မာသံရုံးမှာ
နောက်ထပ် ထိုင်နိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်း တိုးလို့ မရတော့ဘူး။ သံရုံးနဲ့ နီးစပ်သူတွေ အပြောကတော့ ခရမ်းရောင် ပတ်စပို့စာအုပ်
များများရောင်းရအောင် လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ စွတ်စွဲပြောဆိုကြတယ်။
မြန်မာသံရုံးမှာ အလုပ်သမားကိုယ်တိုင် သွားစရာမလိုပဲ သက်တမ်းတိုး
လို့ ရတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုယခု အသစ်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ မူအရဆိုရင်
ယာယီပတ်စပို့ ထုတ်ပေးတဲ့ မူလနေရာတွေကို အလုပ်သမား
တွေ ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ပြီးတော့မှ စာအုပ်အသစ် ထုတ်ယူရမှာဆိုတော့
စရိတ်စက လေးငါးထောင်အထိ ထပ်မံကုန်ကျမယ်လို့ သိရတာကြောင့်
အလုပ်သမားတွေ အထူးစိတ်ထိ ခိုက်နေကြရပါတယ်။
တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး မရိုးရအောင် အလုပ်သမားတွေကို နှိပ်စက်နေကြပါ
လားလို့ပြောနေကြတယ်။
ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်နဲ့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဟာ မြန်မာအလုပ်သမားတွေ
ဆီက ငွေတွေကို ထိုင်းနိုင်ငံ အတွင်းမှာ ကုန်အောင် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ 
ဂုတ်သွေးစုတ်နေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ခေတ်ပညာတတ် မြန်မာ
ပတ်စပို့စာအုပ်တိုးခြင်းဟာ စာအုပ်ဖိုးလောက် သာကုန်သင့်ပြီး ပတ်စပို့
အသစ်လုပ်သလို မျိုး လူကိုယ်တိုင် နယ်စပ်ကို အရောက်သွားပြီး ပြန်လဲ
ရမယ်ဆိုတာက မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ အလွန် ရက်စက်ရာ ကျပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ Trust Link ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်တဲ့ ခရမ်းရောင်
ပတ်စပို့ စာအုပ် ရောင်းချရရေး အတွက် ဒီလောက် ဦးစားမပေးသင့်ဘူး။
စာအုပ်အရောင်းပြောင်းခြင်းထက် မြန်မာအလုပ် သမားတွေ လုံလုံခြုံခြုံ
နေထိုင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိရေးက သာအဓိကဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြ ပါတယ်။ မြန်မာသံရုံးမှာ သက်တမ်းတိုးလို့ရတဲ့ အနေအထားကနေ နယ်စပ်နဲ့ 
ပတ်စပို့ ထုတ်ပေးတဲ့နေရာတွေမှာ လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီးမှ
ပတ်စပို့အသစ်ကိုလဲလှယ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အမိန့်ကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေ
မယ် ဆိုရင် ကျေးကျွန်းသဖွယ် အလုပ်လုပ်နေကြရတဲ့ မြန်မာအလုပ်
သမားတွေအတွက် ဗူးလေးရာဖရုံဆင့် သာမက ရေနစ်သူကို
၀ါးကူထိုးသတ်တာမျိုး ဖြစ်နေတာကြောင့် ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ကြောင်း……
5/08/2012 10:01:00 AM